အောက်စဖို့ဒ်ဆရာတော် ဒေါက်တာဓမ္မသာမိThitsarparami Buddhist Society | Dhamma mp3 Download
အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစကပဏ္ဍိတ ၊ ဓမ္မကထိကဗဟုဇနဟိတဓရ
ရှမ်းပြည်နယ် ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်
အောက်စ်ဖို့ဒ်ဆရာတော် ပါမောက္ခဒေါက်တာ အရှင်ဓမ္မသာမိ D.Phil (Oxford),UK
အောက်စဖို့ဒ်ဆရာတော် ပါမောက္ခဒေါက်တာ အရှင်ဓမ္မသာမိ ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ စုစည်းမှု (MP3)
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အား‌ပေးတဲ့ အကျင့်ကောင်းတရားတော် (၃.၁၁.၂၀၂၁)
Mind Education in Buddhism (၁၈.၁၁.၂၀၂၁)
ဂီရိမာနန္ဒသုတ္တန် (မွေး‌နေ့အနုမောဒနာတရားတော်) (၄.၁၀.၂၀၂၁)
စိတ်ဒုက္ခကို ကုစားခြင်း တရားတော် (၇.၉.၂၀၂၁)
ပြဿနာကို စိန်‌‌ခေါ်ပါ လူကိုမစိန်ခေါ်နဲ့ တရားတော် (၂၁.၁.၂၀၂၁)
ကိုဗစ်-၁၉ လောကဓံ တိုက်ရိုက် တိုက်ခတ်မှုခံရတဲ့ဘဝ မိသားစု၏ အပူကို မျှယူခံစားခြင်း (၄.၈.၂၀၂၁)
အချင်းချင်းမှီခိုကြရတဲ့ လောကထဲမှ မိဘကျေးဇူး (၂.၈.၂၀၂၁)
လောကဓံကို ကရုဏာနဲ့ ကျော်ဖြတ်ရမယ် (၂၀.၇.၂၀၂၁)
အချိန်အကန့်အသတ်ကို သိသူအတွက် ဘ၀တန်ဖိုးကြီး၏တရားတော် (၁၅.၇.၂၀၂၁)
သူ့အကြောင်းဘဲတွေး၊ ကိုယ့်အကြောင်းသိပ်မတွေးနဲ့ (၆.၇.၂၀၂၁)
၀၁။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း ပထမနေ့ – ပထမအချိန် (အခြေခံအာနာပါနရှုမှတ်နည်း)
၀၂။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း ပထမနေ့ – ဒုတိယအချိန်
၀၃။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း ပထမနေ့ – တတိယအချိန် (Relaxation Meditation)
၀၄။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း ပထမနေ့ – စတုတ္ထအချိန်
၀၅။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း ဒုတိယနေ့ – ပထမအချိန် (ကရုဏာဘာဝနာ)
၀၆။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း ဒုတိယနေ့ – ဒုတိယအချိန် (The Science of Compassion)
၀၇။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း တတိယနေ့ – ပထမအချိန် (ကရုဏာဘာဝနာ)
၀၈။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း တတိယနေ့ – ဒုတိယအချိန် (ကရုဏာ)
၀၉။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း တတိယနေ့ – တတိယအချိန် (ဓမ္မအမေးအဖြေ)
၁၀။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း စတုတ္ထနေ့ – ပထမအချိန် (ကရုဏာဘာဝနာ)
၁၁။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း စတုတ္ထနေ့ – ဒုတိယအချိန် (ဓမ္မအမေးအဖြေ)
၁၂။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း ပဉ္စမနေ့ – ပထမအချိန် (ကရုဏာဘာဝနာ)
၁၃။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း ပဉ္မမနေ့ – ဒုတိယအချိန် (ဓမ္မအမေးအဖြေ)
၁၄။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း ဆဋ္ဌမနေ့ – ပထမအချိန် (မုဒိတာ)
၁၅။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း ဆဋ္ဌမနေ့ – ဒုတိယအချိန် (ဓမ္မအမေးအဖြေ)
၁၆။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း သတ္တမနေ့ – ပထမအချိန် (မုဒိတာဘာဝနာ)
၁၇။ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (၇)ရက်တရားစခန်း သတ္တမနေ့ – ဒုတိယအချိန် (ဓမ္မအမေးအဖြေ)
အပြင်လောကဓံနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါ ကရုဏာကို မမေ့ပါနဲ့ (၁၅.၃.၂၀၂၁)
ဆုတောင်းလို့ ဆန္ဒမပြည့်ပါ အဓိဌာန်ကြောင့်သာ ဆန္ဒပြည့်ကြသည် (၃.၂.၂၀၂၁)
စိတ်တိုတတ်တဲ့အကျင့်နဲ့ ကြောက်စိတ် (Frustration and Fear) (၃၁.၁.၂၀၂၁)
အရေးပါလှတဲ့ အဓိဋ္ဌာန်ပါရမီ ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ (The Vitality of Will Power and How to Build It UP) (၃၁.၁.၂၀၂၁)
နှလုံးသွင်းတတ်ခြင်းနှင့် နှလုံးမသွင်းတတ်ခြင်း (Wise Reflection and Unwise Reflection) (၃၀.၁.၂၀၂၁)
ကျန်းမာရေးအတွက် တရားထိုင်ပါ (၂၉.၁.၂၀၂၁)
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက လူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ် (The Buddha Wants Everyone to be Happy) (၂၆.၁.၂၀၂၁)
မိဘများရဲ့ ထာဝရ ဘဝနဲ့ ထာဝရမေတ္တာ (၂၅.၁.၂၀၂၁)
မိမိနှင့်သူတစ်ပါး ပြိုင်တူစိတ်ခံစားမှုကုသခြင်း (Healing Emotions Together for Self and Other) (၂၄.၁.၂၀၂၁)
စာကြည့်တိုက်ထဲက ၈၄,၀၀၀ ဓမ္မစေတီနှင့် နှလုံးသားထဲက ၈၄,၀၀၀ ဓမ္မစေတီ (84,000 Dhamma pagodas in the Library and in our heart) (၂၁.၁.၂၀၂၁)
စိတ်ရဲ့စရိုက်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ အကျင့်ကောင်းများ (၂၁.၁.၂၀၂၁)
ဒီအသိဝင်ရင် အကုန်လုံးကုသိုလ်ဖြစ်ပြီ (With this awareness, everything becomes wholesome) (၁၈.၁.၂၀၂၁)
မထူးဇာတ်လမ်းခင်းချင်တဲ့ စိတ်ကိုဆုံးမပါ (Be Mindful of the Feeling Like Giving it up) (၁၆.၁.၂၀၂၁)
အမြင်ကပ်တဲ့စိတ်ကို ဆုံးမပါ Be Mindful of Irritation (၁၂.၁.၂၀၂၁)
ဒီလောကရဲ့ အညမညသဘော (The Interdependent Nature of Our World)(၁၀.၁.၂၀၂၁)
အိမ်နှင့်အလုပ်ခွင်မှာ နေ့စဉ် စေတီများများ တည်ဆောက်ခြင်း (၉.၁.၂၀၂၁)
မိမိနှင့် ကမ္ဘာကြီးကို ကုစားခြင်း (Healing Oneself and the World) (၆.၁.၂၀၂၁)
ရင်တွင်းငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှု (Inner Peace and Happiness) (၅.၁.၂၀၂၀)
ဆွမ်းအလှူအနုမောဒနာတရားတော် (မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးသြဝါဒ ဘာသာပြန်ဟောကြားချက်) (၅.၁.၂၀၂၀)
လွတ်လပ်ရေး – စိတ်ဒဏ်ရာများ ကုစားခြင်း (၄.၁.၂၀၂၀)
နှစ်သစ်နေ့သစ်အချိန်ကာလအသစ်ကို အသိဉာဏ်ဖြင့် ကြိုဆိုခြင်း (၃.၁.၂၀၂၀)
Annoyanceကို ဂရုစိုက်ပါ (၂၅.၁၂.၂၀၂၀)
Mood swings ကို ဂရုစိုက်ပါ (၂၄.၁၂.၂၀၂၀)
မင်္ဂလာတရားနှင့် နိုင်ငံတော်တရားတော် (၂၂.၁၂.၂၀၂၀)
မိသားစုတန်ဖိုးများနှင့် မိသားစုအင်အား-Family Values and Family Strengths (၂၁.၁၂.၂၀၂၀)
နေ့စဉ် ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ တရားတော် (၁၆.၁၂.၂၀၂၀)
ကိုယ်ချင်းစာတရားဖြင့် မိသားစုဘဝစိုပြေစေရေး (၁၃.၁၂.၂၀၂၀)
အကောင်းမြင်ဝါဒဖြင့် ပြဿနာဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းနိုင်ရေး – To Be Positive and Be Part of Solution (၁၁.၁၂.၂၀၂၀)
တစ်ရက်တာအလှူနဲ့ တစ်နှစ်တာမုဒိတာ တရားတော် (၄.၁၂.၂၀၂၀)
တစ်မျိုးသားလုံး အတိတ်ဒဏ်ရာကုစားရာမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍ Yangon University Can Lead in the Nation’s Healing the Past (၁.၁၂.၂၀၂၀)
Learning How to BuildaCommunity from the Kathina Robe making Practice (in Eng and MM) (29.11.2020)
Daily Happiness is Not Far From You (၂၈.၁၁.၂၀၂၀)
ယုံကြည်မှုဖြင့် ကုစားခြင်း Faith Healing (၂၈.၁၁.၂၀၂၀)
မိသားစုပါရမီ တရားတော် (၂၇.၁၁.၂၀၂၀)
အနှစ်တစ်ရာမှ လုံ့လများနှင့် အနှစ်တစ်ထောင်တန် မုဒိတာ – A Hundred Years of Great Efforts foraThousand Years of Joy (၂၅.၁၁.၂၀၂၀)
ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ကထိန်အနုမောဒနာတရားတော် (၂၂.၁၁.၂၀၂၀) (အင်္ဂလိပ် + မြန်မာဘာသာ)
နေ့စဉ်အသုံးချ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ် တရားတော် (၁၉.၁၁.၂၀၂၀)
Compassion and Stress Management (မြန်မာဘာသာ) (၁၇.၁၁.၂၀၂၀)
Motivation မှန်ဖို့ အရေးကြီးတယ် (၁၇.၁၁.၂၀၂၀)
ကထိန်သင်္ကန်းအလှူမှသင်ပေးသော ညီညွတ်မှုတည်ဆောက်ရေး (၁၆.၁၁.၂၀၂၀)
အခြေခံအဘိဓမ္မာဖြင့် ကရုဏာအကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်း – Contemplating Compassion Through Abhidhamma (၁၄.၁၁.၂၀၂၀)
Compassionate and Happy Social Environment (၁၄.၁၁.၂၀၂၀)
သွားလေသူ နှင့် ကျန်ရစ်သူ တရားတော် (၁၄.၁၁.၂၀၂၀)
မိမိကိုယ်ကို ဝမ်းနည်းခွင့်ပေးပါ – Allow yourself to Grieve (၁၀.၁၁.၂၀၂၀)
သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့် ဝမ်းနည်းမှုကို ကိုင်တွယ်ခြင်း- Mindful Grieving (၉.၁၁.၂၀၂၀)
အများညီညွတ်ရေး၊ စုပေါင်းအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် သိမ်အစဉ်အလာ (၉.၁၁.၂၀၂၀)
မိသားစုကောင်း အစဉ်အလာကို အောက့်မေ့ခြင်း- Positive Family Tradition (၇.၁၁.၂၀၂၀)
ရှုမ၀ စိတ်ခံစားမှု – Beautiful Emotions (၇.၁၁.၂၀၂၀)
၂၀၁၉ခုနှစ် စင်ကာပူတရားစခန်း တရားတော်(၉) (၁၀.၇.၂၀၁၉)
ဘဝအောင်ပွဲ နေ့တိုင်းဆင်နွဲတဲ့ အကျင့်- The Habit of Celebrating Life everyday (၅.၁၁.၂၀၂၀)
ကိုဗစ်ကာလမှာ အရေးပါတဲ့ ဥပုသ်သီလကျင့်စဉ် (၃.၁၁.၂၀၂၀)
ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် သံဃာတော်များ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားအတွက် သြဝါဒစကား (၂.၁၁.၂၀၂၀)
OBV UK ကထိန်အနုမောဒနာတရားတော် (၁.၁၁.၂၀၂၀)
OBV UK Kathina/Robe Offering ceremony Dhamma talk (1.11.2020) (Eng)
အောက်စဖို့ဒ်ဆရာတော် ဟောကြားပေးတော်မူသော တရားရှုမှတ်နည်းများ
ကရုဏာတရားရှုမှတ်နည်း – Compassion Meditation
အကောင်းအဆိုး မဝေဖန်တဲ့ သတိတရား – Non-Judgemental Mindfulness Meditation
ဒုက္ခများများကြည့်မှ ဒုက္ခနားတယ် (ကရုဏာတရားထိုင်နည်း)
ကရုဏာတရားရှုမှတ်နည်း (Compassion Meditation)
မုဒိတာကမ္မဋ္ဌာန်း (Mudita Meditation)
ထမင်းတစ်နပ်စာအကြောင်း ဆင်ခြင်ပြီး တရားရှုမှတ်ပွားများနည်း
ပျံ့လွှင့်နေတဲ့စိတ်နဲ့ အဆက်အသွယ်ရဖို့ ဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်မယ်
ပျော်ရွှင်မှုကို ဦးနှောက်ထဲမှာ သံမှိုနဲ့ရိုက်ထားသလိုစွဲနေဖို့ မုဒိတာတရားထိုင်မယ်
သိစိတ်နဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကို ခံစားပြီး တရားရှုမှတ်နည်း (စိတ်ဖိစီးမှုကိုသိတဲ့စိတ်က စိတ်ဖိစီးမှုကို မဖြစ်စေဘူး)
အိမ်မှာရုံးမှာ လေ့ကျင့်ဖြစ်ဖို့အတွက် သတိပဋ္ဌာန်
ဒုက္ခအကြောင်း ပြဿနာအကြောင်းတွေးပြီး ကရုဏာပွားနည်း
ကိုယ့်ဘဝထဲမှာရှိနေတဲ့ ပီတိတွေတွေ့အောင်ရှာပါ (မုဒိတာတရားရှုမှတ်နည်း)
ဒေါသကို အာရုံလုပ်ပြီးတော့ ဒေါသကို ကရုဏာနဲ့အစားထိုးပြီး ၈-မိနစ် တရားထိုင်မယ်
ဦးနှောက်ကိုရော စိတ်ကိုရော အနားယူဖို့ ၅-မိနစ်တရားထိုင်မယ်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာလ သတိအသိဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချဖို့အတွက် တရားရှူမှတ်နည်း
အကြောက်တရားရှိနေတာကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ ကရုဏာပွားမယ်
ဝေဒနာကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ ဒေါသမဖြစ်အောင် တရားရှုမှတ်နည်း
Emotional Training (၆မိနစ်တရားထိုင်မယ်) (ကြာချိန် ၁၂မိနစ်ခန့်)
စာမေးပွဲဖြေမယ့်ကျောင်းသား/သူလေးတွေ စိတ်ဖိစီးမှုကိုင်တွယ်ဖို့ မုဒိတာတရားထိုင်နည်း (ကြာချိန် ၁၂မိနစ်ခန့်)
တစ်မိနစ်တရားထိုင်ရင် တစ်မိနစ်အကျိုးရှိတယ် (အလုပ်ခွင်မှာ ၃မိနစ် တရားရှုမှတ်နည်း)
ရပ်ကမ္မဋ္ဌာန်း အလုပ်ပေးတရားတော် (ကြာချိန် ၉မိနစ်ခန့်)
အောက်ဆီဂျင်ရှိမှ အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုသနားတဲ့စိတ်လေးနဲ့ ၃-မိနစ်တရားထိုင်မယ် (ကြာချိန် ၉မိနစ်ခန့်)
စိတ်ဖိဆီးမှုကိုကိုင်တွယ်ဖို့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ သုံမိနစ်တရားထိုင်နည်း (ကြာချိန် ၈မိနစ်)
အကောင်းတွေတွေးပြီး တရားရှုမှတ်မယ် (ကြာချိန် ၉-မိနစ်)
သတိပဋ္ဌာန်က ဦးနှောက်ကိုကောင်းစေတယ် ကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေတယ် (ကြာချိန် ၁၀-မိနစ်)
ကင်ဆာဝေဒနာသည်များအတွက် သတိပဋ္ဌာန် Mindfulness based stress management practice for cancer patients (ကြာချိန် ၁၃-မိနစ်)
မုဒိတာ ဘာဝနာပွားနည်း (Mudita Meditation) (ကြာချိန် ၅-မိနစ်)
အကောင်းအဆိုးမဝေဖန်တဲ့ သတိပဋ္ဌာန် Non-Judgmental Mindfulness Meditation (ကြာချိန် ၁၁-မိနစ်)
ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မေတ္တာထားခြင်းအားဖြင့် အနည်းဆုံး ၃-မိနစ်ထရားထိုင်မယ် (ကြာချိန် ၁၄မိနစ်)
အခြေခံသတိပဋ္ဌာန် တရားရှုမှတ်နည်း (Mindfulness Meditation) (ကြာချိန် ၁၆-မိနစ်)
လေးမိနစ် မုဒိတာ တရားရှုမှတ်နည်း (ကြာချိန် ၆-မိနစ်)
ကရုဏာ တရားရှုမှတ်နည်း (Compassion Meditation) (ကြာချိန် ၁၁-မိနစ်)
အခြေခံသတိပဋ္ဌာန် တရားရှုမှတ်နည်း (Mindfulness Meditation) (ကြာချိန် ၈-မိနစ်)
ပင်ပန်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပြီး တရားရှုမှတ်နည်း (Mindfulness Meditation) (ကြာချိန် ၇-မိနစ်)
အလုပ်ခွင်မှာ ၆-မိနစ် တရားထိုင်မယ် (ကြာချိန် ၁၃-မိနစ်)
အလုပ်ခွင်မှာ ၃-မိနစ် တရားထိုင်မယ် (ကြာချိန် ၁၃-မိနစ်)
Introducing Abhidhamma Course by Ven. Khammai Dhammasami
Lesson 1. Introducing Abhidhamma – Two Types of Truth, Conventional and Ultimate (24.9.2020)
Lesson 2. Introducing Abhidhamma – Studying the Mind Through the Cetasikas (Mental Factors/ Mental Activities) (1.10.2020)
Lesson 3. Introducing Abhidhamma – How the Abhidhamma analyses the Three Roots of Negative Emotion, greed, hatred and delusion (further study of the mind through the cetasikas) (8.10.2020)
Lesson 4. Introducing Abhidhamma – Mindfulness, Wisdom and Compassion in the Wholesome Cetasikas (17.10.2020)
Lesson 5. Introducing Abhidhamma – Consciousness (citta): its Bases and Classifications (22.10.2020)
Lesson 6. Introducing Abhidhamma – Abhidhamma Analysis of Matter (rupa) (29.10.2020)
Myanmar Parenting မိသားစုများအတွက် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့အကြောင်းနှင့် သြဝါဒတရားတော် (၃၁.၁၀.၂၀၂၀)
ကိုယ်ချင်းစာတဲ့ အကျင့် – The Habit of Empathy (၃၁.၁၀.၂၀၂၀)
ဝါဆို – ကထိန်ထုံးတမ်းစဉ်လာမှ အများနှင့်သဟဇာတဖြစ်အောင် နေထိုင်နည်း (၃၁.၁၀.၂၀၂၀)
Harmonious Living Practice from the Rains-retreat and Robe-making traditions (31.10.2020) (Eng)
္မမ်ှူ္ပ်္ဒြူ္မ်း္မမ် ္မ်ြးျိင်ှုထုင်း္ဓဝ်ှုဝြှ လြှု ္ဒထ္မိ်ှ (Community Spirit in the Buddhist Monastic Practices) (Shan)
အဘိဓမ္မာမိတ်ဆက် Introducing Abhidhamma (၂၇.၁၀.၂၀၂၀)
စိတ်ညစ်ရာများတဲ့ ကိုဗစ်ကာလမှာ တရားတော် (၂၆.၁၀.၂၀၂၀)
မုဒိတာအကျင့်ရဲ့ အခြေခံအတွေးအခေါ် The Foundation Philosophy of Joyful Habit (၂၅.၁၀.၂၀၂၀)
ခန္တီအကျင့် The exercise of patience (၂၄.၁၀.၂၀၂၀)
ကရုဏာအကျင့် (အနုမောဒနာတရားတော်) (၁၉.၁၀.၂၀၂၀)
အကောင်းမြင်ဝါဒအကျင့် (မွေးနေ့အလှူအနုမောဒနာတရား) (၁၄.၁၀.၂၀၂၀)
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ကွယ်လွန်သွားကြသူများအားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်များအတွက် သြဝါဒမေတ္တာစကား
Leadership in the Challenging Times (13.09.2020)
မေတ္တာတရားမရှိခဲ့လျှင် (In the Absence of Loving-kindness)(၂.၉.၂၀၂၀ မေတ္တာအခါတော်နေ့)
မေတ္တာတရားမရှိခဲ့လျှင် (In the Absence of Loving-kindness) (ရှမ်းဘာသာ)(၂.၉.၂၀၂၀ မေတ္တာအခါတော်နေ့)
Mindfulness of emotion and emotional reactions (24.8.2020) (in English)
မြေအလှူ အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော် (၁၅.၈.၂၀၂၀)
သဟဇာတ အညမည နိဿယပစ္စည်း နှင့် ဝိပဿနာ (၁၀.၈.၂၀၂၀)
ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း အနုမောဒနာတရားတော် (၃.၈.၂၀၂၀) (မြန်မာ + ရှမ်း)
ဝါဆိုလပြည့် ဓမ္မစကြာ တရားအဆီအနှစ် တရားတော် (၃.၈.၂၀၂၀) (ဝါဆိုလပြည့်နေ့)
The Positive Implication of The Buddha’s Sermon (3.8.2020) (Full Moon Day)
လွၼ်ႉၵႅၼ်ထမ်ႇမၸၵ်ႉၵျႃႇ ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇ (3.8.2020) (Full Moon Day)
မွေးနေ့အနုမောဒနာတရားတော်် (၃.၈.၂၀၂၀) (ဝါဆိုလပြည့်နေ့)
A Dialoguefor the Youths, by the Youths (26.07.20)
Consciously or Unconsciously we choose to strengthen our habit (25.07.2020)
ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် မြေအလှူ အနုမောဒနာတရားတာ် (၁၁.၇.၂၀၂၀)
ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာ အကောင်းမြင်ဝါဒက ပိုအရေးကြီးတယ် (၄.၇.၂၀၂၀) (SSBU)
အများအတွက်တွေးရင် ဦးနှောက်ကောင်းတယ် တရားတော်(၂.၇.၂၀၂၀)
Introducing Buddhism Course (2020 Jul)
Introducing Buddhism Lesson 1. What is Buddhism- The Buddha’s Life Story
Introducing Buddhism Lesson 2.Three Signs of Being, Three Fires
Introducing Buddhism Lesson 3. Four Noble Truths
Introducing Buddhism Lesson 4. Noble Eightfold Path
Introducing Buddhism Lesson 5. Wheel of Life, Karma & Re-birth
Introducing Buddhism Lesson 6. The Paramitas
Introducing Buddhism Lesson 7. Meditation, Where to from here
သံဃသာယနသုံးထပ်ကျောင်းဆောင် ရေစက်ချအလှူအနုမောဒနာတရားတော် (၂၄.၆.၂၀၂၀) (ရှမ်း+မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)
နေ့စဉ်အသုံးချမဂ္ဂင်ရှစ်ပါး – The Noble Eightfold Path for Daily Life (၂၀.၆.၂၀၂၀)
ကိုဗစ်-၁၉ကို ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်သင့်လဲ (၇.၆.၂၀၂၀)
ပါရမီဖြည့်ဖက် ဘဝကြင်ဖော် (Spiritual and Life Companionship) တရားတော် (၆.၁.၂၀၂၀) (SSBU)
ဆီးချိုနဲ့ သောကကို ဓမ္မနဲ့ဖြေလျှော့ခြင်း တရားတော် (၂၄.၅.၂၀၂၀)
ဘဝရဲ့အချိန်က အကန့်အသတ်ရှိတယ် တရားတော် (၂၄.၅.၂၀၂၀)(SSBU)
မွေခံထိုက်စေ ဆွမ်းအနုမောဒနာ တရားတော် (၂၀.၅.၂၀၂၀)(SSBU)
သံဝေဂနှင့် အနုမောဒနာတရားတော် (၁၇.၅.၂၀၂၀) (SSBU)
အေးအတူပူအမျှတရားတော် (၁၆.၅.၂၀၂၀) (SSBU)
စိမ်းလန်းစိုပြေရေး စီမံကိန်း ပဒေသာပင် အနုမောဒနာတရားတော် (၁၅.၅.၂၀၂၀)
ထူးဗုဒ္ဓဒဿန ပဒေသာပင် အနုမောဒနာတရားတော် (၁၅.၅.၂၀၂၀)
ဘာကြောင့် ဒုက္ခအကြောင်း ဆွေးနွေးနေရမှာလဲ? (၁၁.၅.၂၀၂၀) (SSBU)
Stress in life: Shall we expect it to become worse or better (10.5.2020) (SSBU) (in Eng)
ဗုဒ္ဓနေ့အကြောင်း တရားတော် (၆.၅.၂၀၂၀) (SSBU)
သင်္ကြန်နှစ်သစ်ကူးကြိုဆိုခြင်းတရား – Dhamma Reflection to Welcome New Year (Myanmar + Eng+ Shan + Thai)
Covid-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သင့် နှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ
Anger Management ဒေါသကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်း
ပြည်တော်ပြန်များကို ကိုယ်ချင်းစာပါ ကြင်နာပါ (၃၁.၃.၂၀၂၀) (SSBU)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာလ သတိအသိဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရေး (၃၀.၃.၂၀၂၀) (SSBU)
Mindfulness and Stress Reduction During the Corona Virus (in English) (30.3.2020) (SSBU)
ကရုဏာတရားအခြေခံတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားပွားမျာပုံ (၂၆.၃.၂၀၂၀) (SSBU)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တွေ့ဆုံနေကြရသော စိတ်ဖိစီးမှုကို ကရုဏာဘာဝနာဖြင့် ကိုင်တွယ်နည်း (Eng + Myanmar) (၂၄.၃.၂၀၂၀) (SSBU)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တွေ့ဆုံနေကြရသော စိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်း (Eng + Myanmar + Shan) (၂၃.၃.၂၀၂၀) (SSBU)
မုဒိတာဘာဝနာ – Mudita Meditation and Q & A (17.3.2020) (SSBU) (in Eng and MM)(အသံပြတ်တောက်မှုပါရှိသည်။)
မုဒိတာဘာဝနာ – Mudita Meditation and Q & A (16.3.2020) (SSBU) (in Eng and MM)
မုဒိတာဘာဝနာ – Mudita Meditation and Q & A (15.3.2020) (SSBU) (in Eng and MM)
မုဒိတာဘာဝနာ (၁၄.၃.၂၀၂၀) (SSBU)
Mudita Meditation and Q & A (14.3.2020) (SSBU) (in English)
မုဒိတာအေၾကာင္းႏွင့္ မုဒိတာဘာ၀နာ (၁၃.၃.၂၀၂၀) (SSBU)
Mudita and Q & A (12.3.2020) (SSBU) (in English)
မုဒိတာအေၾကာင္းႏွင့္ မုဒိတာဘာ၀နာ (၁၂.၃.၂၀၂၀) (SSBU)
Mudita & Practicing and Q & A (12.3.2020) (SSBU) (in English)
Mudita Mediation and Q and A (11.3.2020) (SSBU) (in English + Myanmar)
မုဒိတာအကြောင်း နှင့် မုဒိတာဘာဝနာ (၁၀.၃.၂၀၂၀) (SSBU)
Mudita Mediation and Q and A (10.3.2020) (SSBU) (in English)
Self-esteem without superiority complex or Mudita meditation – မာနမဖြစ်စေတဲ့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု (သို့) မုဒိတာဘာဝနာ (၈.၃.၂၀၂၀) (SSBU) (in English + Myanmar)
(၂၅.၂.၂၀၂၀) တရားသင်တန်း (ပထမအချိန်) (ကမ္ဘောဇရွှေလီ ဓမ္မာရုံ)
(၂၅.၂.၂၀၂၀) တရားသင်တန်း (ဒုတိယအချိန်) (ကမ္ဘောဇရွှေလီ ဓမ္မာရုံ)
My Mindful School (G3to G5International School) (22.2.2020) (in English)
My Mindful School (G6to G 8 International School)(22.2.2020) (in English)
My Mindful School (G9to G 10 International School) (22.2.2020) (in English)
သာလွန်သောအလင်း ဓမ္မစက္ခု တရားတော် (၂၁.၂.၂၀၂၀) (ကမ္ဘောဇရွှေလီဓမ္မရုံ ရန်ကုန်)
အောင်မြင်မှုများနှင့် အားလုံးကိုဆက်စပ်ယူမည် တရားတော် (၂၁.၂.၂၀၂၀) (Shew Me Group of companies)
ရဲရင့်စေ မွန်မြတ်စေသည့် ကရုဏာ သတ္တိ တရားတော် (၂၀.၂.၂၀၂၀) (ရဲမွန်ကျေးရွာ)
ဓမ္မစကူး သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ ဩဝါဒ ခံယူပွဲ အခမ်းအနား (19.2.2020)(မော်လမြိုင်)
တရားထိုင်၍ ဦးနှောက်ခွဲစိပ်ပါရဂူဖြစ်လာတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက ဆင်းရဲသားလေး တရားတော် (၁၈.၂.၂၀၂၀) (မော်လမြိုင်)
A Mindfulness Based Compassion Practice တရားသင်တန်း (၁၇.၂.၂၀၂၀) (AWEI METTA HOTEL)
သတိပဌာန်ကျင့်စဉ်ဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုကိုကိုင်တွယ်ခြင်း Mindfulness As Stress Management Tool တရားသင်တန်း
ကရုဏာရှိမှ လုံခြုံမယ် တရားတော် (၁၅.၂.၂၀၂၀)
(1) Befriending A Polar Bar (Dhamma Workshop for International School Students) (15.2.2020) (Summit Parkview Hotel) (in English)
(2) Befriending A Polar Bar (Dhamma Workshop for International School Students) (15.2.2020) (Summit Parkview Hotel) (in English)
(3) Befriending A Polar Bar (Dhamma Workshop for International School Students) (16.2.2020) (Summit Parkview Hotel) (in English)
(4) Befriending A Polar Bar (Dhamma Workshop for International School Students) (16.2.2020) (Summit Parkview Hotel) (in English)
(5) Befriending A Polar Bar (Dhamma Workshop for International School Students) (16.2.2020) (Summit Parkview Hotel) (in English)
သတိပဌာန်အခြေခံ မုဒိတာနှင့် နေ့စဉ်ချစ်သူများနေ့ – Mindfulness based Joyful Practice & Everyday Valentine (၁၄.၂.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
နားထောင်တာ မေတ္တာ တရားတော် (၁၃.၂.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
(ပ) ခက်ပေမဲ့မရှိမဖြစ် အကျိုးများတဲ့အကောင်းမြင်ဝါဒ တရားသင်တန်း (၁၃.၂.၂၀၂၀) (ကိုးမိုင်ရှမ်းကျောင်း)
(ဒု) ခက်ပေမဲ့မရှိမဖြစ် အကျိုးများတဲ့အကောင်းမြင်ဝါဒ တရားသင်တန်း (၁၃.၂.၂၀၂၀) (ကိုးမိုင်ရှမ်းကျောင်း)
ယနေ့ ဒုက္ခ ယနေ့ ကရုဏာ တရားတော် (၁၁.၂.၂၀၂၀)(အင်းမ)
(ပ) အလုပ်မှာပျော်ရွှင်တိုးတက်ဖို့ ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမမျာ (Buddhist Approach for job satisfaction progress at work) (၁၀.၂.၂၀၂၀)
(ဒု) အလုပ်မှာပျော်ရွှင်တိုးတက်ဖို့ ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမမျာ (Buddhist Approach for job satisfaction progress at work) (၁၀.၂.၂၀၂၀)
(တ) အလုပ်မှာပျော်ရွှင်တိုးတက်ဖို့ ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမမျာ (Buddhist Approach for job satisfaction progress at work) (၁၀.၂.၂၀၂၀)
ကရုဏာတရားထိုင်နည်းနှင့် အမေးအဖြေ (ပထမပိုင်း) (၉.၂.၂၀၂၀) (OBVY)
ကရုဏာတရားထိုင်နည်း(ဒုတိယပိုင်း) (၉.၂.၂၀၂၀) (OBVY)
ကရုဏာတရားထိုင်နည်း အတွေ့အကြုံအမေးအဖြေ (တတိယပိုင်း) (၉.၂.၂၀၂၀) (OBVY)
ဗုဒ္ဓနှင့် သိပ္ပံအဆိုအရ ကရုဏာ၏စွမ်းအား (The Power of Compassion According to Science and Buddha) (၆.၂.၂၀၂၀) (SSBU)
(ပ) ကရုဏာနှင့် အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ တိုင်းပြည် Compassion and A successful Nation Building (၄.၂.၂၀၂၀) (Myanmar Noble University)
(ဒု) ကရုဏာနှင့် အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ တိုင်းပြည် Compassion and A successful Nation Building (၄.၂.၂၀၂၀) (Myanmar Noble University)
ကရုဏာဆိုတာ အထင်သေးတာမဟုတ်ဘူး တရားတော် (၃.၂.၂၀၂၀)
(ပ) ကရုဏါရဲ့ ကုသမှုစွမ်းအားများ The healing powers of compassion (၂.၂.၂၀၂၀) (ဆေးတက္ကသိုလ် ရန်ကုန်)
(ဒု) ကရုဏါရဲ့ ကုသမှုစွမ်းအားများ The healing powers of compassion (၂.၂.၂၀၂၀) (ဆေးတက္ကသိုလ် ရန်ကုန်)
(တ) ကရုဏါရဲ့ ကုသမှုစွမ်းအားများ The healing powers of compassion (၂.၂.၂၀၂၀) (ဆေးတက္ကသိုလ် ရန်ကုန်)
သူကောင်းလို့ ကိုယ်ကောင်းတယ်၊ ကိုယ်ကောင်းလို့ သူကောင်းတယ် (၂.၂.၂၀၂၀)
Brain Default ကိုပြောင်းရမယ် တရားတော် (၃၁.၁.၂၀၂၀) (မိသားစုကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း မကွေး)
(ပ) နေ့စဉ်ဘဝမှာ လူတိုင်းအတွက် ကရုဏာရဲ့တန်ဖိုး The benefits of compassion in daily life (၃၁.၁.၂၀၂၀)(မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်)
(ဒု) နေ့စဉ်ဘဝမှာ လူတိုင်းအတွက် ကရုဏာရဲ့တန်ဖိုး The benefits of compassion in daily life (၃၁.၁.၂၀၂၀) (မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်)
(ပ) ကရုဏာရဲ့ လက်တွေ့ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း The capacities of compassion in solving problems (၁.၂.၂၀၂၀) (ရေဆင်းတက္ကသိုလ်)
(ဒု) ကရုဏာရဲ့ လက်တွေ့ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း The capacities of compassion in solving problems (၁.၂.၂၀၂၀) (ရေဆင်းတက္ကသိုလ်)
သံဝေဂ နှင့် သြဝါဒတရားတော် (၃၀.၁.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် ဦးဏှောက်ပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ် (၃၀.၁.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
ပြိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့စိတ်ကို ဆုံးမပါ (၃၀.၁.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
ကရုဏာဖြင့်မိမိစိတ်ဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ပါ တရားတော် (၂၉.၀၁.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
ဒေါသစိတ်ကို ဆုံးမပါ တရားတော် (၂၈.၁.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
(ပ) အထင်သေးလေ့ရှိကြတဲ့ ကရုဏာရဲ့ကုသမှုစွမ်းအား The underestimated Healing Power of Compassion (၂၇.၁.၂၀၂၀) (Novotel Hotel)
(ဒု) အထင်သေးလေ့ရှိကြတဲ့ ကရုဏာရဲ့ကုသမှုစွမ်းအား The underestimated Healing Power of Compassion (၂၇.၁.၂၀၂၀) (Novotel Hotel)
သတိပဋ္ဌာန်တရားဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို ကိုင်တွယ်ခြင်း Stress Management with Mindfulness Training (၂၇.၁.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
သိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ကို ဆုံးမပါ (၂၇.၁.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
အထင်သေးတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပါ တရားတော် (၂၆.၁.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
မခံချင်တဲ့စိတ်ကို ဆုံးမပါ (၂၅.၁.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
နေ့စဉ်ရွေးချယ်စရာ စိတ်ထားနှစ်ခု (၂၄.၁.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
(ပ) သင်ကြားရေး မွမ်းမံသင်တန်း ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်(ရွှေပြည်သာ) (၂၃.၁.၂၀၂၀)
(ဒု) သင်ကြားရေး မွမ်းမံသင်တန်း ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်(ရွှေပြည်သာ) (၂၃.၁.၂၀၂၀)
(တ) သင်ကြားရေး မွမ်းမံသင်တန်း ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်(ရွှေပြည်သာ) (၂၃.၁.၂၀၂၀)
အေးအတူ ပူအမျှ တရားတော် (၂၃.၁.၂၀၂၀) (Pan Pacific Hotel)
စေတနာ သုံးတန် တရားတော် (၂၂.၁.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/သူများအတွက် စိတ်ဖိစီးမှူကိုင်တွယ်ရေး အပိုင်း(၁) (၂၂.၁.၂၀၂၀) (ဇဗ္ဗူသီရိဗိမာန် ရန်ကုန်)
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/သူများအတွက် စိတ်ဖိစီးမှူကိုင်တွယ်ရေး (QandA) အပိုင်း(၂) (၂၂.၁.၂၀၂၀) (ဇဗ္ဗူသီရိဗိမာန် ရန်ကုန်)
(1) Mindful Compassion from stress management to ethics motivation and conflict resolution (18.1.2020) (PEGU Club)
(2) Mindful Compassion from stress management to ethics motivation and conflict resolution (18.1.2020) (PEGU Club)
ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာ တရားစခန်းပွဲအတွေ့အကြုံ နှင့် သြဝါဒဓမ္မကထာ (၁၆.၁.၂၀၂၀)
နေ့စဉ်ဘဝမှာ စိတ်ဖိစီးမှုကို ကိုင်တွယ်ခြင်း (၈.၁.၂၀၂၀) (ရန်ကန်)
(၇.၁.၂၀၂၀) အပိုင်း(၁) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲ (Remembering the Pass and Ways Forward: A Multidisciplinary Approach to Pali, Abbhidhamma, and Buddhist Studies)
(၇.၁.၂၀၂၀) အပိုင်း(၂) (QandA) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲ (Remembering the Pass and Ways Forward: A Multidisciplinary Approach to Pali, Abbhidhamma, and Buddhist S
အကြောက်တရားက ဦးဏှောက်ကို အနုကြမ်းဆီးတတ်တယ် (၇.၁.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
တူတာတွေးရင် ကြောက်စိတ်နည်းတယ် (၆.၁.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
(၆.၁.၂၀၂၀) အပိုင်း(၂) (QandA) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲ (Remembering the Pass and Ways Forward: A Multidisciplinary Approach to Pali, Abbhidhamma, and Buddhist
ဩကာသ ကန်တော့ချိုး၏ စိတ်ဓါတ် (၅.၁.၂၀၂၀)(ရန်ကုန်)
(ပ) (၅.၁.၂၀၂၀) မုဒိတာ ဦးဏှောက်ဖြင့် မုဒိတာ တိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်ခြင်း – Building A Joyous Nation with A Happy Brain (YTU)
(ဒု) (၅.၁.၂၀၂၀) မုဒိတာ ဦးဏှောက်ဖြင့် မုဒိတာ တိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်ခြင်း – Building A Joyous Nation with A Happy Brain (YTU)
(တ) (၅.၁.၂၀၂၀) မုဒိတာ ဦးဏှောက်ဖြင့် မုဒိတာ တိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်ခြင်း – Building A Joyous Nation with A Happy Brain (YTU)
(ပ) (၄.၁.၂၀၂၀) မုဒိတာ ဦးဏှောက်ဖြင့် မုဒိတာ တိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်ခြင်း – Building A Joyous Nation with A Happy Brain (YTU)
(ဒု) (၄.၁.၂၀၂၀) မုဒိတာ ဦးဏှောက်ဖြင့် မုဒိတာ တိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်ခြင်း – Building A Joyous Nation with A Happy Brain (YTU)
(တ) (၄.၁.၂၀၂၀) မုဒိတာ ဦးဏှောက်ဖြင့် မုဒိတာ တိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်ခြင်း – Building A Joyous Nation with A Happy Brain (YTU)
သာဓု အနုမောဒနာစိတ် (၄.၁.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
ဒုက္ခအသေးကို ဂရုမစိုက်လို့ဒုက္ခအကြီးဖြစ်သွားတယ် (၃.၁.၂၀၂၀) (ရန်ကုန်)
ကရုဏါနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရား – Compassion and ethics (၃.၁.၂၀၂၀) (ရွှေဥဒေါင်းခန်းမ)
နှစ်ဟောင်းကိုစိတ်မနာမှ နှစ်သစ်တကယ်ရောက်လာမယ် (၂.၁.၂၀၂၀) (မန္တလေး)
ပျော်ရွှင်တဲ့ဦးဏှောက် နဲ့ နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုကြရအောင် (၁.၁.၂၀၂၀) (အ.ထ.က ၆ ဗိုလ်တထောင်)
မင်္ဂလသုတ် မေတ္တာသုတ် တရားတော်မြတ် (ပထမပိုင်း) (၁.၁.၂၀၂၀)
မင်္ဂလသုတ် မေတ္တာသုတ် တရားတော်မြတ် (ဒုတိယပိုင်း) (၁.၁.၂၀၂၀)
မင်္ဂလသုတ် မေတ္တာသုတ် တရားတော်မြတ် (တတိယပိုင်း) (၁.၁.၂၀၂၀)
နှစ်ဟောင်းကို ကရုဏာ မုဒိတာဖြင့်ကြည့်ရှု့၍ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုပါ (၃၁.၁၂.၂၀၁၉) (မင်္ဂလာဒုံ)
Mindful Compassion (30.12.2019) (Novotel Hotel) (in English)
အေးအတူ ပူအမျှ (၃၀.၁၂.၂၀၁၉) (မိုင်းဖုန်းသာသနာ့လကာင်္ရကျောင်းတိုက်)
(ပ) ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်ပြီး စီးပွားရေးမှာ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင် – Happy in Life and Successful in Business (၂၉.၁၂.၂၀၁၉) (မန္တလေး)
(ဒု) ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်ပြီး စီးပွားရေးမှာ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင် – Happy in Life and Successful in Business (၂၉.၁၂.၂၀၁၉) (မန္တလေး)
(တ) ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်ပြီး စီးပွားရေးမှာ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင် – Happy in Life and Successful in Business (၂၉.၁၂.၂၀၁၉) (မန္တလေး)
ပြဿနာ ရဲ့ တန်ဖိုး (၂၈.၁၂.၂၀၁၉) (ရန်ကုန်)
ကရုဏာနှင့်မုဒိတာ ဘကြောင့် ငယ်ငယ်တည်က စတင်သင့်သလဲ – Why compassion and sympathetic joy should start at an early age (၂၈.၁၂.၂၀၁၉) (ဓမ္မဒူတတောရ သာသနာ့ရိပ်သာ)
ရိုးရိုးလေးရဲ့အလှ (၂၇.၁၂.၂၀၁၉) (ရန်ကုန်)
စိတ်ဖိစီးမှုကို ကိုင်တွယ်ခြင်း နှင့် ပျော်ရွှင်ခြင်း – Stress management as key to happiness (၂၇.၁၂.၂၀၁၉) (ရန်ကုန်)
သင့်အတွက် ကျွန်တော်အတွက် တလောကလုံးအတွက် ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ် ပျော်ရွှင်တဲ့ဦးနှောက် (၁)(၂၅.၁၂.၂၀၁၉)
သင့်အတွက် ကျွန်တော်အတွက် တလောကလုံးအတွက် ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ် ပျော်ရွှင်တဲ့ဦးနှောက် (၂)(၂၅.၁၂.၂၀၁၉)
သင့်အတွက် ကျွန်တော်အတွက် တလောကလုံးအတွက် ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ် ပျော်ရွှင်တဲ့ဦးနှောက် (၃)(၂၅.၁၂.၂၀၁၉)
သင့်အတွက် ကျွန်တော်အတွက် တလောကလုံးအတွက် ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ် ပျော်ရွှင်တဲ့ဦးနှောက် (၄)(၂၆.၁၂.၂၀၁၉)
သင့်အတွက် ကျွန်တော်အတွက် တလောကလုံးအတွက် ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ် ပျော်ရွှင်တဲ့ဦးနှောက် (၅)(၂၆.၁၂.၂၀၁၉)
သင့်အတွက် ကျွန်တော်အတွက် တလောကလုံးအတွက် ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ် ပျော်ရွှင်တဲ့ဦးနှောက် (၆)(၂၆.၁၂.၂၀၁၉)
ကရုဏာ အခြေခံတဲ့ သီလ (၂၄.၁၂.၂၀၁၉) (ဝမ်းတွင်း)
အသိသတိရှိတဲ့ကျောင်း (A Mindful School)မလှိုင်(၂၄.၁၂.၂၀၁၉)
ကိုရင်လေးများအတွက် စိတ်ခံစားမှု ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုများ (၂) Emotion management in novice training (2) (၂၃.၁၂.၂၀၁၉)(စဉ့်ကိုင်မြို့)
ရုပ်သေးလို စိတ် (၂၂.၁၂.၂၀၁၉) ရန်ကုန်
မိမိပျော်ရွှင်မှုနှင့် အများပျော်ရွှင်မှု (၂၁.၁၂.၂၀၁၉) ရန်ကုန်
Pro-social Emotions and Actions “အများကိုအလေးထားတဲ့စိတ်ခံစာမှုနှင့်လုပ်ငန်း” (၂၁.၁၂.၂၀၁၉) ရန်ကုန်
Pro-social Emotions and Actions “အများကိုအလေးထားတဲ့စိတ်ခံစာမှုနှင့်လုပ်ငန်း”(ဒုတိယပိုင်း) (၂၁.၁၂.၂၀၁၉) ရန်ကုန်
ကိုယ့်ရင်ထဲက ကလေးကို ကရုဏာနဲ့ နှစ်သိမ့်ပါ (၂၁.၁၂.၂၀၁၉) ရန်ကုန်
ကျွဲရိုင်းကို ယဉ်ပါးအောင်ဆုံးမခြင်း “TamingaWild Bull” (၂၀.၁၂.၂၀၁၉)ရန်ကုန်
အများအတွက် စာကြည့်ပါ (၂၀.၁၂.၂၀၁၉)ရန်ကုန်
(ပ) မိနစ်တိုင်းမှာ ဘဝတန်ဖိုးများစေဖို့ (How increase the value of our life minute by minute) (၁၈.၁၂.၂၀၁၉) (UMFCCI) (Mindfulness based stress management practice for cancer patients and cancer care professionals)
(ဒု) မိနစ်တိုင်းမှာ ဘဝတန်ဖိုးများစေဖို့ (How increase the value of our life minute by minute) (၁၈.၁၂.၂၀၁၉) (UMFCCI) (Mindfulness based stress management practice for cancer patients and cancer care professionals)
အနိုင်ယူချင်တာ အားနည်းချက် (၁၈.၁၂.၂၀၁၉) ရန်ကုန်
ကရုဏာရဲ့ကြီးမားသောအင်အား (ပထမပိုင်း) (၁၇.၁၂.၂၀၁၉)သကျဓီတာဗုဒ္ဓကောလိပ် ရန်ကုန်
ကရုဏာရဲ့ကြီးမားသောအင်အား (ဒုတိယပိုင်း) (၁၇.၁၂.၂၀၁၉)သကျဓီတာဗုဒ္ဓကောလိပ် ရန်ကုန်
ပါရမီ အားလုံးရဲ့ အခြေခံဖြစ်တဲ့ ကရုဏာတရား (၁၆.၁၂.၂၀၁၉) (သကျဓီတာဗုဒ္ဓကောလိပ် ရန်ကုန်)
မိမိ သူတစ်ပါး စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ ကရုဏာတရား (၁၅.၁၂.၂၀၁၉) (ဘန်ကောက်)
အတန်းကျောင်းကတည်းက စရမည့် သတိပဌာန် (၁၅.၁၂.၂၀၁၉) (မဟာချိုင်မြို့)
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျဉ်းကျပ်အောင် လုပ်တဲ့စိတ် (၆.၁၂.၂၀၁၉) (ရန်ကုန်)
အများအတွက်ကြိုးစားလို့ ထိပ်တန်းရောက်သူ (၅.၁၂.၂၀၁၉) (ရန်ကုန်)
ကိုယ်ချင်းစာသမျှ အမြတ် ထွက်တယ် (၄.၁၂.၂၀၁၉) (ရန်ကုန်)
ကြောက်တက်တာ အန္တရာယ်မကင်းဘူး တရားတော် (၃.၁၂.၂၀၁၉)
ပြိုင်လို့ ဒုက္ခများတယ် (၂.၁၂.၂၀၁၉) (ရန်ကုန်)
ပြဿနာရဲ့ အစိတ်အပိုင်း မဖြစ်စေဖို့ Let’s We Become Part of the Problems (၁.၁၂.၂၀၁၉) (ဘီလင်းကျောင်းတိုက် ရန်ကုန်)
(ပ) သတိပဌာန် စိတ်ခံစားမှု အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်နှင့် တမျိုးသားလုံး၏အမှတ်သညာ (Mindfulness, Emotion, National Library and National Memory) (၃၀.၁၁.၂၀၁၉) (အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် နေပြည်တော်)
(ဒု) သတိပဌာန် စိတ်ခံစားမှု အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်နှင့် တမျိုးသားလုံး၏အမှတ်သညာ (Mindfulness, Emotion, National Library and National Memory) (၃၀.၁၁.၂၀၁၉) (အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် နေပြည်တော်)
(တ) သတိပဌာန် စိတ်ခံစားမှု အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်နှင့် တမျိုးသားလုံး၏အမှတ်သညာ (Mindfulness, Emotion, National Library and National Memory) (၃၀.၁၁.၂၀၁၉) (အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် နေပြည်တော်)
အများအတွက် ပါတဲ့ ပညာရေး Pro-Social Learning (ပ-အချိန်) (၂၉.၁၁.၂၀၁၉) (CAE Private School NPT)
အများအတွက် ပါတဲ့ ပညာရေး Pro-Social Learning (ဒု-အချိန်) (၂၉.၁၁.၂၀၁၉) (CAE Private School NPT)
အပြုသဘောဆောင်ခြင်း နှင့် တီထွင်ကြံဆနိုင်ခြင်း (ပထမပိုင်း) (၂၈.၁၁.၂၀၁၉) (ပညာပန်းတိုင် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း)
အပြုသဘောဆောင်ခြင်း နှင့် တီထွင်ကြံဆနိုင်ခြင်း (ဒုတိယပိုင်း) (၂၈.၁၁.၂၀၁၉) (ပညာပန်းတိုင် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း)
Mindfulness and Working with limitations (28.11.2019) (UN Office NPT) (in English)
ဦးနှောက်ပညာရေး နှင် စိတ်ခံစားမှုပညာရေး ( အိုင်ကျူနှင့် အီးကျူ ) (၂၆.၁၁.၂၀၁၉) (သာမညတောင်)
သတိအခြေခံတဲ့ကရုဏာ (၂၆.၁၁.၂၀၁၉) (ကျိုက်ထို)
အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တောင်ကြီးမြို့တရားသင်တန်း အပိုင်း(၁) (၂၄.၁၁.၂၀၁၉)
အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တောင်ကြီးမြို့တရားသင်တန်း အပိုင်း(၂) (၂၄.၁၁.၂၀၁၉)
အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တောင်ကြီးမြို့တရားသင်တန်း အပိုင်း(၃) (၂၄.၁၁.၂၀၁၉)
အတိတ်ရဲ့ ရတနာများကို တူးဖော်ခြင်း Excavating Treasure from The Past (၂၀.၁၁.၂၀၁၉) (ဆည်းဆာဘိုးဘွားရိပ်သာ)
ကရုဏာသည် အားနည်းချက်မဟုတ် Compassion is not Weakness (၂၀.၁၁.၂၀၁၉) (ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း လှည်းတန်
ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု Happiness Culture (၁၈.၁၁.၂၀၁၉) (ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်)
Recognizing Boundaries with Boundless Heart (ပထမပိုင်း) (၁၉.၁၁.၂၀၁၉) (UN Office)
Recognizing Boundaries with Boundless Heart (ဒုတိယပိုင်း) (၁၉.၁၁.၂၀၁၉) (UN Office)
Recognizing Boundaries with Boundless Heart (တတိယပိုင်း) (၁၉.၁၁.၂၀၁၉) (UN Office)
အိမ်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ လန်းတဲ့စိတ် ဆန်းတဲ့ဦးနှောက် (ဒု) Mindful Brain, Happy brain at work and at Home (16.11.2019) (Park Royal Hotel Ygn)
အိမ်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ လန်းတဲ့စိတ် ဆန်းတဲ့ဦးနှောက် (တ) Mindful Brain, Happy brain at work and at Home (16.11.2019) (Park Royal Hotel Ygn)
အိမ်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ လန်းတဲ့စိတ် ဆန်းတဲ့ဦးနှောက် (ပ) Mindful Brain, Happy brain at work and at Home (16.11.2019) (Park Royal Hotel Ygn)
လူအများ အတွက် ကထိန်ကသင်ပေးတဲ့ လူမှုရေး အတွေးအခေါ် Social Throught from the Kathina practice (၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ဟိုပုံး)
ပါရဂူရဟန်းတော်များနှင့် သာသနာ့လမ်းခရီး (ဂုဏ်ပြုအနုမောဒနာ) (၁၁.၁၁.၂၀၁၉) (SSBU)
ဆရာဝန် သူနာပြုနှင့် လူနာများအတွက် ဂရုဏာ ဘာဝနာ ဆေးကောင် (၅.၁၁.၂၀၁၉) (ဇီဝိတဒါနသံဃာဆေးရုံ မန္တလေး) – compassion as medicine for the care providers and patients
ကထိန်အစဉ်အလာက သင်ပေးတဲ့ ဗုဒ္ဓအလိုကျဘဝနေထိုင်နည်း (၅.၁၁.၂၀၁၉ မန္တလေး) – A Buddist Way of life from the Robe-Offering Tradition
အပိုင်း (၁) ကထိန်သင်္ကန်း၊ စိတ်ပျော်ရွှင်မှု နှင့် စုပေါင်းစိတ်ဓါတ် တရားသင်တန်း – Kathina Robe, Exercise of Joy and community spirit Dhamma Workshop Part 1 (02.11.2019 SG)
အပိုင်း (၂) ကထိန်သင်္ကန်း၊ စိတ်ပျော်ရွှင်မှု နှင့် စုပေါင်းစိတ်ဓါတ် တရားသင်တန်း – Kathina Robe, Exercise of Joy and community spirit Dhamma Workshop Part2(02.11.2019 SG)
အပိုင်း (၃) ကထိန်သင်္ကန်း၊ စိတ်ပျော်ရွှင်မှု နှင့် စုပေါင်းစိတ်ဓါတ် တရားသင်တန်း – Kathina Robe, Exercise of Joy and community spirit Dhamma Workshop (03.11.2019 SG)
၀န္ဒာမိ ဘန္တေ တရားတော် (ရှမ်း + မြန်မာ ဘာသာ) (၂၆.၁၀.၂၀၁၉) (တာချီလိတ်)
၀န္ဒာမိ ဘန္တေ တရားတော် ( မြန်မာ ဘာသာ) (၂၆.၁၀.၂၀၁၉) (တာချီလိတ်)
ကထိန်အနုမောဒနာ (၂၆.၁၀.၂၀၁၉) (ရန်ကုန်)
Mindfulness and Mudita Meditation ( Alcalá University, Spain) (23.10.2019) (in English and Spanish Translation)
Mudita Mediation (in English) (7.9.2019) (Forest of Dean, UK)
(၅.၉.၂၀၁၉) အောက်စဖို့ဒ်ဗုဒ္ဓဝိဟာရ မေတ္တာတရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်
(၄.၉.၂၀၁၉) အောက်စဖို့ဒ်ဗုဒ္ဓဝိဟာရ မေတ္တာတရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်
(၃.၉.၂၀၁၉) အောက်စဖို့ဒ်ဗုဒ္ဓဝိဟာရ မေတ္တာတရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်
(၂.၉.၂၀၁၉) အောက်စဖို့ဒ်ဗုဒ္ဓဝိဟာရ မေတ္တာတရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်
သူသူငါငါ လျှော့တွက်ကြတဲ့ ကရုဏာစွမ်းရည် The underestimated value of compassion (၁၁.၇.၂၀၁၉)MTU မန္တလေးမြို့
ဘုရားအလောင်းတို့ရဲ့ မြင့်မားတဲ့စိတ်ဓာတ် The Noble Spirit of the Buddha-to-be (၁၁.၇.၂၀၁၉)ကူမဲ
အများအတွက်တွေးမှ ပါရမီ တရားတော် (၁၀.၇.၂၀၁၉) ပြင်ဦးလွင်
ငါ့လှေ ငါထိုး ပဲခူးရောက်ရောက် I don’t care attitude (၇.၇.၂၀၁၉) (ကျောက်ဆည်)
ကရုဏာမှတည်ဆောက်ပေးတဲ့ ဘဝရဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းရည်လResilience in life through compassion (ပထမအချိန်) (၇.၇.၂၀၁၉) (မြို့တော်ဆေးရုံ)
ကရုဏာမှတည်ဆောက်ပေးတဲ့ ဘဝရဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းရည်လResilience in life through compassion (ဒုတိယအချိန်) (၇.၇.၂၀၁၉) (မြို့တော်ဆေးရုံ)
သာမဏေကျော် စာသင်သားများအား ညနေခင်းဩဝါဒ (လေးကျွန်းမာန်အောင် သာမဏေကျော် စာသင်တိုက်၊ ရန်ကင်းတောင်) (၆.၇.၂၀၁၉)
အိုင်ကျူပညာရေးနှင့် ဗုဒ္ဓ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ် IQ Education and The Buddha’s Education Psychology (၆.၇.၂၀၁၉) (စစ်ကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်)
ကရုဏာအခြေခံ တိုင်းပြုပြည်ပြုစိတ်ဓာတ် Compassion based constructive mindset for the Nation (၆.၇.၂၀၁၉ စစ်ကိုင်း)
ဒေါသကြောင့်အပ်နဲ့ထွှင်းရမှာ ပုဆိန်နဲ့ပေါက် Anger makes A Mountain out ofaMolehill တရားသင်တန်း (၅.၇.၂၀၁၉) (ရတနာပုံတက္ကသိုလ်)
ဘဝရဲ့အတိုင်းအတာများနှင့် ကရုဏာ၏အတိုင်းမဲ့ စွမ်းရည် Limitations of life and the unlimited quality of compassion (၄.၇.၂၀၁၉) (မန္တလေးတက္ကသိုလ်)
ကရုဏာချည်မျှင် Compassion Thereads တရားတော် (၇.၃.၂၀၁၉ အမရပူရ)
မုဒိတာတိုင်းပြည် တည်ဆောက်ရအောင် Let’s Build A Mudita Nation (၃.၇.၂၀၁၉) (မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်)
တိုင်းပြုပြည်ပြု ကရုဏာစွမ်းရည် (၁.၇.၂၀၁၉) (တောင်ကြီး)
ဝါဆိုသင်္ကန်းအလှူ အနုမောဒနာတရားတော် (ဝါဆိုသင်္ကန်းကို ဗုဒ္ဓဘာသာလူမှုဒဿမှ တစေ့တစောင်း သုံးသပ်ခြင်း) (၃၀.၆.၂၀၁၉) (OBVY)
ပြဿနာနှင့်ပညာ ဆက်နွယ်ပုံ (Dhamma Workshop for Mums) (၃၀.၆.၂၀၁၉)
(၁) သတိအခြေခံသောကရုဏာနှင့် အပြုသဘောဆောင်သောလုပ်ရပ် Mindful Compassion and Positive Contributions (၂၈.၆.၂၀၁၉)
(၂) သတိအခြေခံသောကရုဏာနှင့် အပြုသဘောဆောင်သောလုပ်ရပ် Mindful Compassion and Positive Contributions (၂၈.၆.၂၀၁၉)
(၁) သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံ မိမိကိုယ်ကို ကရုဏာထားခြင်းနှင့် စိတ်ဖိစီးမှု ကိုင်တွယ်ခြင်း – Mindfullness Based Self-Compassion and Stress Management (27.6.2019)
(၂) သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံ မိမိကိုယ်ကို ကရုဏာထားခြင်းနှင့် စိတ်ဖိစီးမှု ကိုင်တွယ်ခြင်း – Mindfullness Based Self-Compassion and Stress Management (27.6.2019)
ဝါဒဆိုသင်္ကန်းအလှူအနုမောဒနာတရား (၂၇.၆.၂၀၁၉ OBVY)
သတိပဋ္ဌာန် .b (dot b) (၁၃.၆.၂၀၁၉) (မဟာမြကျွန်းသာ အထက်တန်းကျောင်း
၂။ .b (Dotb) – ကျောင်းသား/သူများအတွက် သတိအခြေခံ စိတ်ဖြေလျှော့နည်း (၁၂.၆.၂၀၁၉) (ဒု)
၁။ .b (Dotb) – ကျောင်းသား/သူများအတွက် သတိအခြေခံ စိတ်ဖြေလျှော့နည်း (၁၂.၆.၂၀၁၉) (ပ)
အတိတ်၏ စိတ်ခံစားမှုကိုကုစားခြင်း (ပ) Healing Difficult Emotion from the Past (၁၀.၆.၂၀၁၉)
အတိတ်၏ စိတ်ခံစားမှုကိုကုစားခြင်း (ဒု) Healing Difficult Emotion from the Past (၁၀.၆.၂၀၁၉)
အတိတ်၏ စိတ်ခံစားမှုကိုကုစားခြင်း (တ) Healing Difficult Emotion from the Past (၁၀.၆.၂၀၁၉)
သတိအခြေခံ ကရုဏါဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုကိုကျော်လွှားခြင်း – Mindful asastress reduction instrument (၉.၆.၂၀၁၉) (ရန်ကုန်သူနာပြုတက္ကသိုလ်)
၀၁။ Mindfulness and Motivation တရားသင်တန်း (ပ) (၉.၆.၂၀၁၉)
၀၂။ Mindfulness and Motivation တရားသင်တန်း (ဒု) (၉.၆.၂၀၁၉)
၀၃။ Mindfulness and Motivation တရားသင်တန်း (တ) (၉.၆.၂၀၁၉)
၁။ စိတ်ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် သတိပဋ္ဌာန်တရားတော် (ပ) Mindfulness, Ethic and Emotion Development (8.6.2019)
၂။ စိတ်ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် သတိပဋ္ဌာန်တရားတော် (ဒု) Mindfulness, Ethic and Emotion Development (8.6.2019)
၁။ အခြေခံ အဘိဓမ္မာအသိနှင့် စိတ်ခံစားမှုမြှင့်တင်ရေး (ပ) – Basic Abhidhamma Knowledge and Emotion Improvement (7.6.2019)
၂။ အခြေခံ အဘိဓမ္မာအသိနှင့် စိတ်ခံစားမှုမြှင့်တင်ရေး (ဒု) – Basic Abhidhamma Knowledge and Emotion Improvement (7.6.2019)
၃။ အခြေခံ အဘိဓမ္မာအသိနှင့် စိတ်ခံစားမှုမြှင့်တင်ရေး (တ) – Basic Abhidhamma Knowledge and Emotion Improvement (7.6.2019)
ကြိုစားရေလောင်းမှ ရှင်သန်မည့်ပီတိပန်းများ The Flower of the Joy that Need Watering (၆.၆.၂၀၁၉ ရန်ကင်း)
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ရွေးယူပါမှ – Happiness… only if you choose it (၅.၆.၂၀၁၉ အောင်ပန်း)
မဟာဝိဟာရဓမ္မဝိနယတက္ကသိုလ် စာသင်သားသစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနား သြဝါဒကထာ
၁။ ကျားကြီးနဲ့မုန့်ဝေစားသားသားမီးမီးတို့ခြံထဲကတရားစကား Positive! In the playground we shareacake withatiger (in Eng) (1.6.2019)
၂။ ကျားကြီးနဲ့မုန့်ဝေစားသားသားမီးမီးတို့ခြံထဲကတရားစကား Positive! In the playground we shareacake withatiger (in Eng) (1.6.2019)
၃။ ကျားကြီးနဲ့မုန့်ဝေစားသားသားမီးမီးတို့ခြံထဲကတရားစကား Positive! In the playground we shareacake withatiger (in Eng) (2.6.2019)
၄။ ကျားကြီးနဲ့မုန့်ဝေစားသားသားမီးမီးတို့ခြံထဲကတရားစကား Positive! In the playground we shareacake withatiger (in Eng) (2.6.2019)
ကုလသမဂ္ဂအသိအမှတ်ပြုဗုဒ္ဓနေ့ – United Nations Recognized Vesak Day (16.5.2019)
အဘိဏှသုတ် တရားတော် (၄.၅.၂၀၁၉)
စိတ်ကို အားကောင်းစေတဲ့ ကရုဏါအသိ Mindful Compassion That Empowers The Mind (၁.၅.၂၀၁၉ ထိုင်း)
ပါရမီဖြည့်ဖက် တရားတော် (၂၄.၄.၂၀၁၉)
အောက်စဖို့ဒ်ဗုဒ္ဓဝိဟာရ စင်ကာပူ Volunteers များအား ဟောကြားသော သြဝါဒတရားတော်
လူ့ဦးဏှောက် လူ့စိတ် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲက သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး (၅.၄.၂၀၁၉) – Mindful Peace in the Brain, the Mind and the Society
ဓမ္မအမေးအဖြေ (၁၉.၄.၂၀၁၉) (ပထမနေ့ ပထမအချိန်)
အကောင်းအဆိုးမဝေဖန်တဲ့ သတိပဋ္ဌာန် (၁၉.၄.၂၀၁၉) (ပထမနေ့ ပထမအချိန်)
Mindfulness Based Emotion and Management (Day1 – Part1) (19.4.2019 SG) (OBVS 10th Anniversary) (မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်)
Mindfulness Based Emotion and Management (Day1 – Part2) (19.4.2019 SG) (OBVS 10th Anniversary)(မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်)
Mindfulness Based Emotion and Management (Day1 – Part3) (19.4.2019 SG) (OBVS 10th Anniversary)(မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်)
Mindfulness Based Emotion and Management (Day2 – Part1) (20.4.2019 SG) (OBVS 10th Anniversary)(မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်)
Mindfulness Based Emotion and Management (Day2 – Part2) (20.4.2019 SG) (OBVS 10th Anniversary)(မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်)
Mindfulness Based Emotion and Management (Day2 – Part3) (20.4.2019 SG) (OBVS 10th Anniversary)(မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်)
၁။ ကရုဏာအခြေခံတရား ဘာဝနာပွားများနည်း Mindfulness on Compassion (၁၃.၄.၂၀၁၉) (SSBU)
၂။ ကရုဏာအခြေခံတရား ဘာဝနာပွားများနည်းMindfulness on Compassion (၁၄.၄.၂၀၁၉) (SSBU)
၃။ ကရုဏာအခြေခံတရား ဘာဝနာပွားများနည်း Mindfulness on Compassion (၁၅.၄.၂၀၁၉) (SSBU)
Q and A about meditation(28.2.2019 OBVS) (in English)
ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ – Interdependent (၁.၂.၂၀၁၉)
အလုပ်ခွင်ပျော်ရွှင်မှု နဲ့ ဘဝပျော်ရွှင်မှု အပိုင်း (၁) (၁.၂.၂၀၁၉)
အလုပ်ခွင်ပျော်ရွှင်မှု နဲ့ ဘဝပျော်ရွှင်မှု အပိုင်း (၂) (၁.၂.၂၀၁၉)
(ပ) ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့် ဦးနှောက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံကပြောတဲ့ မိမိနှလုံးသားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ငြိမ်းချမ်းရေး (၃၀.၁.၂၀၁၉)
(ဒု) ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့် ဦးနှောက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံကပြောတဲ့ မိမိနှလုံးသားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ငြိမ်းချမ်းရေး (၃၀.၁.၂၀၁၉)
ပျော်ရွှင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ် မုဒိတာဆိုတဲ့အကျင့် (၂၉.၁.၂၀၁၉ ကယား)
သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့်စိတ်ခံစားမှုမြှင့်တင်ရေး သင်တန်း Mindfulness-based E.Q Development Workshop (၂၄.၁.၂၀၁၉ မြစ်ကြီးနား)
နိဗ္ဗာနဿပစ္စယောရဲ့ အကောင်းမြင်ဝါဒ (၂၄.၁.၂၀၁၉ မြစ်ကြီးနား)
ရွှံ့ညွှန့်ထဲက ကြာပန်း – Lotus in the Mud (၂၃.၁.၂၀၁၉ ဝိုင်းမော်မြို့) (ရှမ်းဘာသာ + မြန်မာ)
အတိတ်က မုဒိတာ စွမ်းအား The Joyful Power of the Past (၂၂.၁.၂၀၁၉ မိုးကောင်း)
အနောက်တိုင်းက ပေါ်ပြူလာ သတိပဋ္ဌာန် (၂၂.၁.၂၀၁၉ နမ္မတီး) (ရှမ်းဘာသာ + မြန်မာ)
စိတ်လှုပ်ရှားမှုမလိုအပ်တဲ့ ပီတိ Joy Without Excitement (၂၁.၁.၁၉ မိုးကောင်း) (ရှမ်းဘာသာ + မြန်မာ)
သိပ္ပံပညာရှင်များရေးသားသောသတိပဋ္ဌာန် Mindfulness among Contemporary Scientistics (၂၁.၁.၁၉ မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ်)
မုဒိတာ – မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား (၂၀.၁.၂၀၁၉ မိုးညှင်းမြို့) (ရှမ်းဘာသာ + မြန်မာ)
ဩကာသကန်တော့ချိုးထဲက ရတနာကို တူးဖော်ခြင်း (၁၉.၁.၂၀၁၉) (ရှမ်းဘာသာ + မြန်မာ)
အများအတွက်တွေးရင် အသက်ရှည်မယ် (၁၈.၁.၂၀၁၉ ဖားကန့်) (ရှမ်းဘာသာ + မြန်မာ)
နေ့စဉ်အသုံးချကရုဏာ (၁၇.၁.၂၀၁၉ မြစ်ကြီးနား) (ရှမ်းဘာသာ + မြန်မာ)
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားကဏ္ဍတွင် သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံသော စိတ်ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးရေး Mindfulness based Emotion Management in Health and Sport (၁၆.၁.၂၀၁၉ နေပြည်တော်)
သတိပဋ္ဌာန်ရှုဒေါင့်မှ ဥပဒေနှင့် စိတ်ခံစားမှုကို သုံးသပ်ခြင်း (ပ) Mindfulness Law and Emotion (၁၆.၁.၂၀၁၉ နေပြည်တော်)
သတိပဋ္ဌာန်ရှုဒေါင့်မှ ဥပဒေနှင့် စိတ်ခံစားမှုကို သုံးသပ်ခြင်း (ဒု) Mindfulness Law and Emotion (၁၆.၁.၂၀၁၉ နေပြည်တော်)
ဒုက္ခနားလည်မှ တကယ်ရန်ကင်းတယ် – Safe When Problem Is Understood (၁၅.၁.၂၀၁၉ ရန်ကင်း-ရန်ကုန်)
ကိုရင်လေးများအတွက် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုများ – Emotion Management in Novice Training (၉.၁.၂၀၁၉)
အိမ်ကိုတောင်မှ ကျောင်းကဲ့သို့ဆောက်ပါ – Build Your Home As A Temple (၈.၁.၂၀၁၉)
လူသူကြားထဲ အဝင်ဆန့်အောင်လုပ်ကြရတော့ (၇.၁.၂၀၁၉ မန္တလေး)
ကရုဏာဆေးစွမ်းကောင်း Compassion is Healing (၆.၁.၂၀၁၉)
နေ့စဉ်အသုံးချ သစ္စာလေးပါး Four Nobel Truth for Daily Life (၆.၁.၂၀၁၉)
စိတ်ခံစားမှု ကောင်းများကို တီထွင်ဖန်တီးခြင်း Engineering Positive Emotion (ပ) (၆.၁.၂၀၁၉)
စိတ်ခံစားမှု ကောင်းများကို တီထွင်ဖန်တီးခြင်း Engineering Positive Emotion (ဒု) (၆.၁.၂၀၁၉)
စိတ်ခံစားမှု ကောင်းများကို တီထွင်ဖန်တီးခြင်း Engineering Positive Emotion (တ) (၆.၁.၂၀၁၉)
စိတ်ခံစားမှု ကောင်းများကို တီထွင်ဖန်တီးခြင်း Engineering Positive Emotion (ပ) (၇.၁.၂၀၁၉)
စိတ်ခံစားမှု ကောင်းများကို တီထွင်ဖန်တီးခြင်း Engineering Positive Emotion (ဒု) (၇.၁.၂၀၁၉)
နေ့စဉ်အသုံးချ ဓမ္မစကြာ (ပ) The Wheel of Truth for Daily Life (၁.၁.၂၀၁၉)
နေ့စဉ်အသုံးချ ဓမ္မစကြာ (ဒု) The Wheel of Truth for Daily Life (၁.၁.၂၀၁၉)
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏တရားတော် ဘာသာပြန်များ
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားဘာသာပြန် (၁၀.၄.၂၀၁၉ ရန်ကုန်)
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး အထူတရားပွဲ (ရှမ်းဘာသာ+မြန်မာဘာသာ) (၁၀.၄.၂၀၁၉ ရန်ကုန်) (ကြာချိန် ၃နာရီ ၃၂မိနစ်)
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားဘာသာပြန် (၉.၄.၂၀၁၉ ရန်ကုန်)
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားဘာသာပြန် (၈.၄.၂၀၁၉ နေပြည်တော်)
OBVS ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားလက်ဆောင် (၂၆.၂.၂၀၁၉ BigBox) (တရားအကျဉ်းချုပ်ဘာသာပြန် အင်္ဂလိပ်/မြန်မာ)
OBVS ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားလက်ဆောင် (၂၆.၂.၂၀၁၉ BigBox) (အစ/အဆုံး)
OBVS ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး အနုမောဒနာသြဝါဒ (၂၆.၂.၂၀၁၉ OBVS) (အစ/အဆုံး)
OBVS ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး အနုမောဒနာသြဝါဒ (၂၆.၂.၂၀၁၉ OBVS) (တရားအကျဉ်းချုပ်ဘာသာပြန် အင်္ဂလိပ်/မြန်မာ)
အောက်စဖို့ဒ်ဆရာတော်ဝိဇာတမွေးနေ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး မေတ္တာပို့ နှင့် တရားတော်မြန်မာဘာသာပြန် (၁၃.၁၁.၂၀၁၈)
အောက်စဖို့ဒ်ဆရာတော်ဝိဇာတမွေးနေ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးအထူးဓမ္မသဘင် (ရှမ်းဘာသာ + မြန်မာဘာသာ) (၁၃.၁၁.၂၀၁၈)
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး မေတ္တာခံယူခြင်း နှင့် ဓမ္မဘသင် (စ/ဆုံး ကြာချိန် 3:37 min) (၁၅.၇.၂၀၁၈ စင်္ကာပူ)
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားတော် ဘာသာပြန် (မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်) (၁၅.၇.၂၀၁၈ စင်္ကာပူ)
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားပန်းချီ ဘာသာပြန် (အင်္ဂလိပ်) (၁၅.၇.၂၀၁၈ စင်္ကာပူ)
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားတော် ဘာသာပြန် (မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်) (၁၂.၇.၂၀၁၈ စင်္ကာပူ)
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး မေတ္တာခံယူခြင်း နှင့် ဓမ္မဘသင် (စ/ဆုံး ကြာချိန် 1:44 min)(၁၂.၇.၂၀၁၈ စင်္ကာပူ)
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားလက်ဆောင် ဆုံးမသြဝါဒနှင့်မေတ္တာပို့ (၁၁.၇.၂၀၁၈ စင်္ကာပူ)
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားတော် ဘာသာပြန် (မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်) (၁၁.၇.၂၀၁၈ စင်္ကာပူ)
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားပန်းချီ ဘာသာပြန် (မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်) (၁၁.၇.၂၀၁၈ စင်္ကာပူ)
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားတော်နှင့်မေတ္တာသြဝါဒခံယူခြင်း (စ/ဆုံး ကြာချိန် 2:54 min) (၁၁.၇.၂၀၁၈ စင်္ကာပူ)
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးသြဝါဒကို ဆရာတော်ဓမ္မသာမိမှ မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် တရားတော် (၇.၂.၂၀၁၈)
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ထံမှ ဩဝါဒခံယူခြင်းနှင့် ပရိတ်တရားတော်များ နာယူကြည်ညိုခြင်း (၇.၂.၂၀၁၈)
မိုင်းဖုန်းဆရာတေ်ာဘုရားကြီး သြဝါဒတရား (အောက်စဖို့ဒ်ဆရာတော်၏ သက်တော် (၅၃)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ဓမ္မသဘင်)
ဓမ္မစကြာ နှင့် အနတ္တလက္ခဏသုတ္တန် တရားတော်များ
ဓမ္မစကြာတရား သင်တန်း (ပထမပိုင်း) (ကလော) – (၂-၃-၂၀၁၇)
ဓမ္မစကြာတရား သင်တန်း (ဒုတိယပိုင်း) (ကလော) – (၂-၃-၂၀၁၇)
ဓမ္မစကြာတရား သင်တန်း (တတိယပိုင်း) (ကလော) – (၂-၃-၂၀၁၇)
သီအိုရီအရသိတဲ့အနတ္တနှင့် တကယ့်လက်တွေ့အနတ္တ (ပထမနေ့) – (၆.၂.၂၀၁၇)
သီအိုရီအရသိတဲ့အနတ္တနှင့် တကယ့်လက်တွေ့အနတ္တ (ဒုတိယနေ့) – (၇.၂.၂၀၁၇)
သီအိုရီအရသိတဲ့အနတ္တနှင့် တကယ့်လက်တွေ့အနတ္တ (တတိယနေ့) – (၈.၂.၂၀၁၇)
ဓမ္မစကြာအကျယ် အပိုင်း(၁) – (၁၂-၁၁-၂-၁၆)
ဓမ္မစကြာအကျယ် အပိုင်း(၂) – (၁၂-၁၁-၂-၁၆)
ဓမ္မစကြာအကျယ် အပိုင်း(၃) – (၁၃-၁၁-၂-၁၆)
ဓမ္မစကြာအကျယ် အပိုင်း(၄) – (၁၃-၁၁-၂-၁၆)
ဓမ္မစကြာအကျယ် အပိုင်း(၅) – (၁၉-၁၁-၂-၁၆)
ဓမ္မစကြာအကျယ် အပိုင်း(၆) – (၂၇-၁၁-၂-၁၆)
ဓမ္မစကြာအကျယ် အပိုင်း(၇) – (၂၇-၁၁-၂-၁၆)
ဓမ္မစကြာအကျယ် အပိုင်း(၈) – (၂၇-၁၁-၂-၁၆)
အနတ္တလက္ခဏသုတ္တန်တရားတော် – (၂၇-၁၁-၂၀၁၆)
တရားဦး ဓမ္မစကြာ အခြေခံ ဟောပြော ဆွေးနွေးပွဲ (၁) – (၂၄-၁၂-၂၀၁၅)
တရားဦး ဓမ္မစကြာ အခြေခံ ဟောပြော ဆွေးနွေးပွဲ (၂) – (၂၄-၁၂-၂၀၁၅)
တရားဦး ဓမ္မစကြာ အခြေခံ ဟောပြော ဆွေးနွေးပွဲ (၃) – (၂၄-၁၂-၂၀၁၅)
သာမညဖလသုတ် အကျဉ်းချုပ် တရားတော်များ
သာမညဖလသုတ် အကျဉ်းချုပ် – အပိုင်း(၁) – (၃-၁၁-၂၀၁၆)
သာမညဖလသုတ် အကျဉ်းချုပ် – အပိုင်း(၂) – (၃-၁၁-၂၀၁၆)
သာမညဖလသုတ် အကျဉ်းချုပ် – အပိုင်း(၃) – (၃-၁၁-၂၀၁၆)
သာမညဖလသုတ် အကျဉ်းချုပ် – အပိုင်း(၄) – (၃-၁၁-၂၀၁၆)
ကရုဏာအသိနှင့်စိတ်ခံစားမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးနည်းလမ်း (မြန်မာဘာသာ)
Emotion Management and Mindful Compassion (1)
Emotion Management and Mindful Compassion (2) – Auto Mind
Emotion Management and Mindful Compassion (3) – Using Awareness to manage Auto Mind
Emotion Management and Mindful Compassion (4) – Basic Meditation Instruction
Emotion Management and Mindful Compassion (5) – Mindful eating for Physical and Mental Health
Emotion Management and Mindful Compassion (6) – Joyful feeling
Emotion Management and Mindful Compassion (7) – How People Relate to the Society through Emotion
Emotion Management and Mindful Compassion (8) – Questions & Answers
Emotion Management and Mindful Compassion (9) – Mindfulness and Negative Emotion management
Emotion Management and Mindful Compassion (10) – Surprise Factors and emotional reaction
Emotion Management and Mindful Compassion (11) – Relaxation meditation
Emotion Management and Mindful Compassion (12) – Mindful Compassion Exercise
၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များ
နေ့စဉ်ဘဝမှာ တူးယူပန်ဆင်နိုင်တဲ့ ရတနာ Treasure Avalianle to You in Daily Life (၃၁.၁၂.၂၀၁၈)
အများအတွက် တွေးတောပေးခြင်းနှင့်အကောင်းမြင်စိတ္တဗေဒ Altruism and Positive Psychology (၂၉.၁၂.၂၀၁၈)
အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ နှင့် အကောင်းမြင်ဝါဒ Buddhist Worldview and Positive Thinking (၂၈.၁၂.၂၀၁၈)
သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံသော စိတ်ခံစားမှုမြှင့်တင်ရေး နှင့် ပညာရေး – Mindfulness Emotion Managment and Education (၂၆.၁၂.၂၀၁၈)
EQ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သတိပဋ္ဌာန်တရား – EQ Development and Mindfulness Meditation (၂၆.၁၂.၂၀၁၈)
EQ Development and Mindfulness Meditation (English) (26.12.2018)
သတိပဋ္ဌာန်သုတ်လာ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ကျင့်စဉ်များ (၂၄.၁၂.၂၀၁၈)
အကောင်းမြင်ဝါဒနှင့် သမ္မာဝါစာတို့၏ ပါရမီ (၂၃.၁၂.၂၀၁၈)
နမော်နမဲ့များ၏ နတ်ဒေဝါ (၂၂.၁၂.၂၀၁၈)
စိတ်ခံစားမှု အစာမကြေသည့်အတိတ် – Undigested Past (၁၉.၁၂.၂၀၁၈)
အနောက်တိုင်းသိပ္ပံပညာရှင်များ ဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့ သတိပဋ္ဌာန် – Mindfulness Pracrice Among Western Scientists (၁၉.၁၂.၂၀၁၈)
စီးပွားရေးလောကထဲက ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် မာယာ (၁) – The illusion of seaparateness in the business world (၁၈.၁၂.၂၀၁၈)
စီးပွားရေးလောကထဲက ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် မာယာ (၂) – The illusion of seaparateness in the business world (၁၈.၁၂.၂၀၁၈)
စီးပွားရေးလောကထဲက ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် မာယာ (၃) – The illusion of seaparateness in the business world (၁၈.၁၂.၂၀၁၈)
စားနိုင်တာထက်ပို ကိုက်မိကြတဲ့ စိတ်ခံစားမှုအစားအစာ – Emotion we bite more than we can chew (၁၇.၁၂.၂၀၁၈)
Mindfulness and Stress Management. (8.12.2018) (English)
(ပ) လေးနက်စွာနားစွင့်ခြင်း နှင့် စိတ်ထားမျှတစွာ လေ့လာနိုင်ခြင်း (၇.၁၂.၂၀၁၈)
(ဒု) လေးနက်စွာနားစွင့်ခြင်း နှင့် စိတ်ထားမျှတစွာ လေ့လာနိုင်ခြင်း (၇.၁၂.၂၀၁၈)
(ပ) စိတ်ဖိစီးမှုကိုကိုင်တွယ်ရန် ကရုဏာနှင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းရည် – Compassion and Resilience in Stress Management (၆.၁၂.၂၀၁၈)
(တ) လေးနက်စွာနားစွင့်ခြင်း နှင့် စိတ်ထားမျှတစွာ လေ့လာနိုင်ခြင်း (၇.၁၂.၂၀၁၈)
(ဒု) စိတ်ဖိစီးမှုကိုကိုင်တွယ်ရန် ကရုဏာနှင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းရည် – Compassion and Resilience in Stress Management (၆.၁၂.၂၀၁၈)
(တ) စိတ်ဖိစီးမှုကိုကိုင်တွယ်ရန် ကရုဏာနှင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းရည် – Compassion and Resilience in Stress Management (၆.၁၂.၂၀၁၈)
Dhamma Discussion with Kids (Grade3to 5) (2.12.2018 Yangon)
Dhamma Discussion with Kids (Grade6to 8) (2.12.2018 Yangon)
Dhamma Discussion with Kids (Grade9to 10) (2.12.2018 Yangon)
အကောင်းမြင်ဝါဒက အားနည်းချက်လား? Is Positive ThinkingaWeakness? (၀၁.၁၂.၂၀၁၈)
သင်နှင့် ကျွနု်ပ်တို့အတွက် ဗုဒ္ဓ၏ ဦးနှောက်အတွေးအခေါ်များ (ပ) (Buddha Brain for You and Me) (၁.၁၂.၂၀၁၈)
သင်နှင့် ကျွနု်ပ်တို့အတွက် ဗုဒ္ဓ၏ ဦးနှောက်အတွေးအခေါ်များ (ဒု) (Buddha Brain for You and Me) (၁.၁၂.၂၀၁၈)
အလုပ်မှာပျော်ရွှင်နိုင်မှ ဘဝအောင်မြင်မည် – Life Truly Succeeds only throught Job Satisfaction (၃၀.၁၁.၂၀၁၈)
အလုပ်ကများအလုပ်ကရှား သြဝါဒတရားတော် (၂၈.၁၁.၂၀၁၈ သီရိလင်္ကာ)
အနှိုင်းမဲ့ဆရာမြတ်၏ အတိုင်းမဲ့ကရုဏာ – Boundless Compassion of Incomparable Teacher (၂၄.၁၁.၂၀၁၈)
စိတ်ခံစားမှုအလှ – The Beauty of Emotion (၂၃.၁၁.၂၀၁၈)
ပါရမီဆယ်ပါးတရားတော် (၂၂.၁၁.၂၀၁၈) ဝိဇာတမွေးနေ့ အထူတရားသင်တန်း
ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ အနုမောဒနာတရားတော် (၁၅.၁၁.၂၀၁၈)
အလှူရှင်များ ဂုဏ်ပြုလွှာပေးအပ်ပွဲ အနုမောဒနာတရားတော် (၁၅.၁၁.၂၀၁၈)
ဝိဇာတမွေးနေ့ အထူးဓမ္မသဘင် အနုမောဒနာတရားတော် (၁၄.၁၁.၂၀၁၈)
ဝိဇာတမွေးနေ့ အနုမောဒနာတရားတော် (၁၄.၁၁.၂၀၁၈)
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကထိန်အစဉ်အလာမှ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ သွန်သင်မှုများ (၉.၁၁.၂၀၁၈)
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အကောင်းမြင်ဝါဒ (The Buddha Positive Thinking) (၅.၁၀.၂၀၁၈ USA)
မိမိကိုယ်လည်းဂုဏ်ယူပါ သူတစ်ပါးကိုလည်းဂုဏ်ယူပါ (Be Proud of Yourself and More) (၃.၁၀.၂၀၁၈ USA)
တရားဆွေးနွေးခြင်း (၁.၁၀.၂၀၁၈ USA)
အဆက်စပ်သိပါစေ တရားတော် (၃၁.၁.၂၀၁၈)
ဝါဆိုသင်္ကန်းလှူဒါန်းရသည့် သဘောထားအမြင် (၁၈.၈.၂၀၁၈)
ဓမ္မစကြာမှသင်ကြားပေးသော ကရုဏာတုန့်ပြန်မှု – Compassionate Response in The Dhammacakka Teaching (Eng + Myanmar) (18.7.2018)
မင်္ဂလသုတ်တော်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း – An Overview of the concept of Blessing in Buddhism – Mangala Sutta
The Underestimated Power of Compassion as Attitude in Daily Life (22.6.2018 Germany Berlin) (in English)
စိတ်ဖိစီးမှု ဒုက္ခကို အကောင်းမြင်ဝါဒ ဖြင့် ရင်ဆိုင်ခြင်း – Managing Daily Stress with Positive Outlook (၂၁.၆.၂၀၁၈ ဂျာမနီ)
ဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ပညာနှင့် အီးကျူ ဖွံ့ဖြိုးရေး (ပ) – Buddhist Psychology and E.Q Enhancement (၁၅.၆.၂၀၁၈)
ဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ပညာနှင့် အီးကျူ ဖွံ့ဖြိုးရေး (ဒု) – Buddhist Psychology and E.Q Enhancement (၁၅.၆.၂၀၁၈)
ဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ပညာနှင့် အီးကျူ ဖွံ့ဖြိုးရေး (တ) – Buddhist Psychology and E.Q Enhancement (၁၅.၆.၂၀၁၈)
အချင်းချင်းတည်မှီရတဲ့ လူ့လောကအတွက်ရှိကိုရှိရမည့်သတိအခြေခံကရုဏာ (ပ) – Mindful Compassion for the Interconnected World (၁၄.၆.၂၀၁၈)
အချင်းချင်းတည်မှီရတဲ့ လူ့လောကအတွက်ရှိကိုရှိရမည့်သတိအခြေခံကရုဏာ (ဒု) – Mindful Compassion for the Interconnected World (၁၄.၆.၂၀၁၈)
အချင်းချင်းတည်မှီရတဲ့ လူ့လောကအတွက်ရှိကိုရှိရမည့်သတိအခြေခံကရုဏာ (တ) – Mindful Compassion for the Interconnected World (၁၄.၆.၂၀၁၈)
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့ သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံ ကရုဏာ-မုဒိတာဆေး – Mindful Compassion and Joy As Side-effect-free Medicine (၁၃.၆.၂၀၁၈)
စိတ်ခံစားမှုကိုလေ့ကျင့်ပေးနိုင်သည် – Emotion can be Trained(၁၃.၆.၂၀၁၈)
ပျော်ရွှင်ခြင်းကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်သော ကြံံကြံ့ခံနိုင်မှု (ပ) – Resilience Engineers Happiness (၁၂.၆.၂၀၁၈)
ပျော်ရွှင်ခြင်းကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်သော ကြံံကြံ့ခံနိုင်မှု (ဒု) – Resilience Engineers Happiness (၁၂.၆.၂၀၁၈)
ပျော်ရွှင်ခြင်းကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်သော ကြံံကြံ့ခံနိုင်မှု (တ) – Resilience Engineers Happiness (၁၂.၆.၂၀၁၈)
Mindful Compassion As The Engineering Instrument For Resilience (11.6.2018)
သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံ ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေး ဒဿန (ပ) – Mindfulness-Based Buddhist Education Philosophy (၇.၆.၂၀၁၈)
သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံ ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေး ဒဿန (ဒု) – Mindfulness-Based Buddhist Education Philosophy (၇.၆.၂၀၁၈)
သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံ ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေး ဒဿန (တ) – Mindfulness-Based Buddhist Education Philosophy (၇.၆.၂၀၁၈)
မင်တစ်စက်ရဲ့ မုဒိတာစွမ်းအား (ပ) – A Joyful Power of One Dot (၆.၆.၂၀၁၈)
မင်တစ်စက်ရဲ့ မုဒိတာစွမ်းအား (ဒု) – A Joyful Power of One Dot (၆.၆.၂၀၁၈)
မင်တစ်စက်ရဲ့ မုဒိတာစွမ်းအား (တ) – A Joyful Power of One Dot (၆.၆.၂၀၁၈)
(ပ) ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာအစဉ်အလာ – A Joyful Buddhist Tradition of the Administrators (၅.၆.၂၀၁၈)
(ဒု) ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာအစဉ်အလာ – A Joyful Buddhist Tradition of the Administrators (၅.၆.၂၀၁၈)
(တ) ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာအစဉ်အလာ – A Joyful Buddhist Tradition of the Administrators (၅.၆.၂၀၁၈)
ကရုဏာဖြင့် ပညာသို့သွားရာလမ်း (၁) – Compassion Constructs The Road to Wisdom (၄.၆.၂၀၁၈)
ကရုဏာဖြင့် ပညာသို့သွားရာလမ်း (၂) – Compassion Constructs The Road to Wisdom (၄.၆.၂၀၁၈)
ကရုဏာဖြင့် ပညာသို့သွားရာလမ်း (၃) – Compassion Constructs The Road to Wisdom (၄.၆.၂၀၁၈)
စုပေါင်းလုံ့လ သမဝါယမအတွက် သတိပဌာန် အခြေခံသောကရုဏာ (၁) – Mindful Compassion As The Basic of Cooperative Motivation (၃.၆.၂၀၁၈)
စုပေါင်းလုံ့လ သမဝါယမအတွက် သတိပဌာန် အခြေခံသောကရုဏာ (၂) – Mindful Compassion As The Basic of Cooperative Motivation (၃.၆.၂၀၁၈)
စုပေါင်းလုံ့လ သမဝါယမအတွက် သတိပဌာန် အခြေခံသောကရုဏာ (၃) – Mindful Compassion As The Basic of Cooperative Motivation (၃.၆.၂၀၁၈)
တို့လူသားများ ဒီထက်ပိုစွမ်းတယ် (၁) – Human Beings are more capable than this (၁.၆.၂၀၁၈)
တို့လူသားများ ဒီထက်ပိုစွမ်းတယ် (၂) – Human Beings are more capable than this (၁.၆.၂၀၁၈)
တို့လူသားများ ဒီထက်ပိုစွမ်းတယ် (၃) – Human Beings are more capable than this
နေ့စဉ်အသုံးချ ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင် (၁) – Applied Dhamma Attitude in Daily Life (၃၁.၅.၂၀၁၈)
နေ့စဉ်အသုံးချ ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင် (၂) – Applied Dhamma Attitude in Daily Life (၃၁.၅.၂၀၁၈)
သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့်မိမိနှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးနက်စွာ နားစွင့်ခြင်း (၁) – Mindful Deep Listening to Yourself and Your Environment (၃၀.၅.၂၀၁၈)
သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့်မိမိနှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးနက်စွာ နားစွင့်ခြင်း (၂) – Mindful Deep Listening to Yourself and Your Environment (၃၀.၅.၂၀၁၈)
သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့်မိမိနှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးနက်စွာ နားစွင့်ခြင်း (၃) – Mindful Deep Listening to Yourself and Your Environment (၃၀.၅.၂၀၁၈)
အရှေ့နှင့်အနောက်တိုင်းကြား တန်ဖိုးများညှိနှိုင်းပေးတဲ့မဇ္ဈိမပဋိပဒါ (၁) – The Middle Way Medium between The Two Value Systems (၂၉.၅.၂၀၁၈)
အရှေ့နှင့်အနောက်တိုင်းကြား တန်ဖိုးများညှိနှိုင်းပေးတဲ့မဇ္ဈိမပဋိပဒါ (၂) – The Middle Way Medium between The Two Value Systems (၂၉.၅.၂၀၁၈)
တိုးတက်မှုတစ်ခုရဲ့ ရှုဒေါင့်သုံးခု – Three Aspects of One Development တရားတော် (၂၈.၅.၂၀၁၈)
ညနေခင်းဩဝါဒ မိန့်ကြားပေးခြင်း (ရတနာပန်းကုံး ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်ကြီး) (၁၀.၅.၂၀၁၈)
အကောင်းမြင်တတ်လျှင် ဆေးဖြစ်သည် – Positive Outlook as Medicine (၁၀.၅.၂၀၁၈)
စီးပွားရေး လောက၏ စိတ်ဖိစီးမှုဒါဏ်ရာကို အသိဉာဏ်ပညာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း – Transforming Stress into Wisdom for the Business People (16.3.2018)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုနှင့် သတိပဌာန်အခြေခံ ကရုဏာတရား (၁) – Mindful Compassion and Resilience for Business (11.3.2018)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုနှင့် သတိပဌာန်အခြေခံ ကရုဏာတရား (၂) – Mindful Compassion and Resilience for Business (11.3.2018)
Strategy Thinking – Part 1 (7.3.2018)
Strategy Thinking – Part2(7.3.2018)
Strategy Thinking – Part3(7.3.2018)
သတိ၊ ကရုဏာဖြင့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲခြင်း (ပ) – Mindful Compassion for Adaptability (6.3.2018)
သတိ၊ ကရုဏာဖြင့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲခြင်း (ဒု) – Mindful Compassion for Adaptability (6.3.2018)
သတိ၊ ကရုဏာဖြင့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲခြင်း (တ) – Mindful Compassion for Adaptability (6.3.2018)
Special Lecture by English on Student-Centered Learning (5.3.2018 ITBMU)
Mindfulness for Organization and Development (ပထမအချိန်) (၄.၃.၂၀၁၈ ရန်ကုန်)
Mindfulness for Organization and Development (ဒုတိယအချိန်) (၄.၃.၂၀၁၈ ရန်ကုန်)
Mindfulness for Organization and Development (တတိယအချိန်) (၄.၃.၂၀၁၈ ရန်ကုန်)
သြဝါဒအနုမောဒနာတရားတော် (၃.၃.၂၀၁၈ SSBU)
စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးတွန်းအား ကရုဏာတရား (၁) – Compassion as motive for Business and Development (၂၇.၂.၂၀၁၈ ရန်ကုန်)
စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးတွန်းအား ကရုဏာတရား (၂) – Compassion as motive for Business and Development (၂၇.၂.၂၀၁၈ ရန်ကုန်)
အလုပ်ကများ အလုပ်ကရှား (၂၄.၂.၂၀၁၈ သကျဓီတာသီလရှင်စာသင်တိုက်)
ဓမ္မစကြာထဲက စိတ်ခံစားမှုကိုင်တွယ်နည်း – Emotion Management in Dhammacakkara (၂၆.၂.၂၀၁၈ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်)
အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရေး ကရုဏာရဲ့တန်ဖိုး (ပထမနေ့ – ၁) – The Value of Compassion in Stress Management in Workplace A (၂၄.၂.၂၀၁၈)
အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရေး ကရုဏာရဲ့တန်ဖိုး (ပထမနေ့ – ၂) – The Value of Compassion in Stress Management in Workplace B (၂၄.၂.၂၀၁၈)
အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရေး ကရုဏာရဲ့တန်ဖိုး (ဒုတိယနေ့ – ၁) – The Value of Compassion in Stress Management in Workplace A (၂၅.၂.၂၀၁၈)
အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရေး ကရုဏာရဲ့တန်ဖိုး (ဒုတိယနေ့ – ၂) – The Value of Compassion in Stress Management in Workplace B (၂၅.၂.၂၀၁၈ )
အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရေး ကရုဏာရဲ့တန်ဖိုး (ဒုတိယနေ့ – ၃) – The Value of Compassion in Stress Management in Workplace C (၂၅.၂.၂၀၁၈)
အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရေး ကရုဏာရဲ့တန်ဖိုး (ဒုတိယနေ့ – ၄) – The Value of Compassion in Stress Management in Workplace D (၂၅.၂.၂၀၁၈)
ဘာသာစကားထဲက စိတ်ခံစားမှုများ – The Influence of Emotion in Languages (၂၃.၂.၂၀၁၈ MUFL)
တရားထိုင်ခြင်းဖြင့် အသိနှင့်စိတ်ခံစားမှုစွမ်းရည်တိုးမြှင့်စေရေး – Buddhist Meditation as Cognitive and E.Q Development Program (၂၃.၂.၂၀၁၈ ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် မန္တလေး)
နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးအတွက် EQ နှင့် အကောင်းမြင်ဝါဒ တရားတော် (၁) – E.Q and Positive Thinking in International Relations A (၁၈.၂.၂၀၁၈)
နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးအတွက် EQ နှင့် အကောင်းမြင်ဝါဒ တရားတော် (၂) – E.Q and Positive Thinking in International Relations B (၁၈.၂.၂၀၁၈)
နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးအတွက် EQ နှင့် အကောင်းမြင်ဝါဒ တရားတော် (၃) – E.Q and Positive Thinking in International Relations C (၁၈.၂.၂၀၁၈)
အားကျမခံစိတ်ကို အဘိဓမ္မာရှုဒေါင့်မှ သုံးသပ်ခြင်း – Analysis of competitive mind habit as motivator (၅.၂.၂၀၁၈)
ရင်ထဲမှာတည်ဆောက်ရတဲ့ ရတနာစေတီ – The Treasure Pagoda Enshrined in Your Hear (၃၁.၁.၂၀၁၈)
မိမိစိတ်ခံစားမှု အထူးသတိပြု (2018-01-29 တောင်စွန်း)
လောကီ လောကုတ္တရာအကျိုးနှစ်မျိုးပါတဲ့ ပါရမီ – Buddhist Practices for Both Worldly Development and Nirvana (2018-01-26)
စိတ်ခံစားမှုအသိဉာဏ်ဘာကြောင့် မရှိမဖြစ် အရေးပါ – Why Emotional Intelligence is Vital (2018-01-24 Taunggyi University)
နေရာတိုင်းမှာ ဦးဆောင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှု – Emotion that Leads Everywhere Mandalay (2018-01-23)
နေ့စဉ်အသက်ရှုဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ကရုဏာနဲ့ မုဒိတာ အောက်စီဂျင် (2018-01-22 တောင်ငူ)
နိဗ္ဗာနပစ္စယောဟောတု သဘောထားအမြင် (2018-01-21)
ကရုဏာရှေ့ထားရင် စီးပွားရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသလား အပိုင်း(၁) – Is Compassion bad for Business? – Part 1 (၁၈.၁.၂၀၁၈)
ကရုဏာရှေ့ထားရင် စီးပွားရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသလား အပိုင်း(၂) – Is Compassion bad for Business? – Part2(၁၈.၁.၂၀၁၈)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သတိပဌာန်အခြေခံစိတ်ခံစားမှုအသိဉာဏ် အပိုင်း(၁) – Mindfulness and Emotional Intelligence for Business People – Part1 (၁၇.၁.၂၀၁၈)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သတိပဌာန်အခြေခံစိတ်ခံစားမှုအသိဉာဏ် အပိုင်း(၂) – Mindfulness and Emotional Intelligence for Business People – Part2 (၁၇.၁.၂၀၁၈)
ဒုက္ခသစ္စာ ခလုတ်တိုက်မိတယ် (Stumbling on the Inconvenient Truths) (၁၁.၁.၂၀၁၈ ည ၇:၃၀)
ဓမ္မစကြာ (2018-01-11 University of Mandalay )
ဩကာသကန်တော့ချိုးနှင့် စိတ်ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးရေး – AwKarTha Tamwe (2018-01-10)
တွေ့ကိုတွေ့ရမည့် စိတ်ခံစားမှု လှိုင်းလုံးကြီးများ – The Inevitable Emotional Waves Pathein (2018-01-09)
သတိမပြုမိတဲ့ အဂတိအပြုအမူ – The Unnoticed Prejudice Yangon Eastern University ( 2018-01-08)
ဩဝါဒပါတိမောက် – AwWarDaParTiMauk North Okkalapa (2018-01-08)
ကရုဏာအခြေခံသောာ ပျော်ရွှင်မှု၏ စိန်ခေါ်မှုများ (ပထမနေ့ – ပ) – Challenging to the Compassionate Happiness A (2018-01-06)
ကရုဏာအခြေခံသော ပျော်ရွှင်မှု၏ စိန်ခေါ်မှုများ (ပထမနေ့ – ဒု) – Challenging to the Compassionate Happiness B (2018-01-06)
ကရုဏာအခြေခံသော ပျော်ရွှင်မှု၏ စိန်ခေါ်မှုများ (ပထမနေ့ – တ) – Challenging to the Compassionate Happiness C (2018-01-06)
ကရုဏာအခြေခံသောာ ပျော်ရွှင်မှု၏ စိန်ခေါ်မှုများ (ဒုတိယနေ့ – ပ) – Challenging to the Compassionate Happiness A (2018-01-07)
ကရုဏာအခြေခံသောာ ပျော်ရွှင်မှု၏ စိန်ခေါ်မှုများ (ဒုတိယနေ့ – ဒု) – Challenging to the Compassionate Happiness B (2018-01-07)
ကရုဏာအခြေခံသောာ ပျော်ရွှင်မှု၏ စိန်ခေါ်မှုများ (ဒုတိယနေ့ – တ) – Challenging to the Compassionate Happiness C (2018-01-07)
ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ – Inter Being Lanmadaw (2018-01-05)
တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိသည (2018-01-02)
ကိုယ်ချင်းစာအတွေးများ၏မြစ်ဖျားခံရာ – The Source of Sympathetic Thought (2018-01-01 Mandalay )
၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များ
အလုပ်ခွင်အတွက် ဆက်ဆံရေးအောင်မြင်စေဖို့ သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့် စိတ်ခံစားမူကိုင်တွယ်ခြင်း (ပ) – Mindful Management Of Emotions For Intra Personnel Relations At Work 1 (2017-01-09 MICT)
အလုပ်ခွင်အတွက် ဆက်ဆံရေးအောင်မြင်စေဖို့ သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့် စိတ်ခံစားမူကိုင်တွယ်ခြင်း (ဒု) – Mindful Management Of Emotions For Intra Personnel Relations At Work2(2017-01-09 MICT)
အတိတ်က ခံစားမှုအရိပ် (2017-01-10 တာမွေ)
အလုပ်ကများ အလုပ်ကရှား (၂၁ ရာစု ပရိယတ္တိ ဓမ္မသာကစ္ဆာ) (2017-01-11 ဓမ္မဒူတ)
အလုပ်ကများ အလုပ်ကရှား (2017-01-11)
နင်လားဟဲ့ ဒုက္ခ (2017-01-11)
အရေးပေါ်ဌာနသည် အရေးပေါ်အတွက်သာ (2017-01-16 IM 2)
ကရုဏာအသိမှ တည်ဆောက်ထားသော ပျော်ရွှင်မှု သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့် စိတ်ခံစားမှုဖွ့ံ့ဖြိုးရေး (၁) (2017-01-17 YIT)
ကရုဏာအသိမှ တည်ဆောက်ထားသော ပျော်ရွှင်မှု သတိပဋ္ဌာန်ဖြင့် စိတ်ခံစားမှုဖွ့ံ့ဖြိုးရေး (၂) (2017-01-18 YIT)
ဗုဒ္ဓဒဿနရှုဒေါင့်မှ သစ္စာနှင့်ဘ၀ – Truth and Life in Buddhist Philosophy (2017-01-19 RASU)
မူလတန်ဖိုးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုး – Value And Culture In Buddhist Philosophy (2017-01-20 ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်)
သီအိုရီအရသိတဲ့အနတ္တနှင့်လက်တွေ့သိတဲ့အနတ္တ (ပထမနေ့) (၆.၂.၂၀၁၇) (သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် စစ်ကိုင်း) (Eng + Myanmar)
သီအိုရီအရသိတဲ့အနတ္တနှင့်လက်တွေ့သိတဲ့အနတ္တ (ဒုတိယနေ့) (၇.၂.၂၀၁၇) (သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် စစ်ကိုင်း) (Eng + Myanmar)
သီအိုရီအရသိတဲ့အနတ္တနှင့်လက်တွေ့သိတဲ့အနတ္တ (တတိယနေ့) (၈.၂.၂၀၁၇) (သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် စစ်ကိုင်း) (Eng + Myanmar)
မသိစိတ်နှင့် ကမ္ဘာ့ဆွဲအား စိတ်ခံစားမှု – Subconscious Mind and Emotional Gravity (2017-03-05 Mingalardone Air Forces)
စာရိတ္တပညာနှင့်စိတ်ခံစားမှုအကြောင်း – Ethic and Emotion (2017-3-17)
မာတာယထာ ဂရုဏာ တရားတော် – The Compassion of Mother (2017-3-19)
ပြသနာတွေရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို အခွင့်အလမ်းများအဖြစ် လက်ခံရင်ဆိုင်ပါ (ပ) – Enbrace The Challenges and Take It Oppotunity A (2017-03-11 Myanmar Idol)
ပြသနာတွေရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို အခွင့်အလမ်းများအဖြစ် လက်ခံရင်ဆိုင်ပါ (ဒု) – Enbrace The Challenges and Take It Oppotunity B (2017-03-11 Myanmar Idol)
ပျော်နိုင်ပါလျှက် ပျော်ဖို့မေ့နေသူများ (၂) (2017-03-11)
Super Emotion Market (2017-03-13 City Mart MyayNiGone)
စာရိတ္တပညာနှင့် စိတ်ခံစားမှု – Ethics and Emotions (2017-03-16 IM Mdy)
အများလက်ခံခြင်းနှင့်ငြင်းပယ်ခြင်း၏ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး – Burden of Acceptance and Non-Acceptance (2017-05-21 SG)
ကိုယ့်လုပ်နိုင်တာနှင့်မလုပ်နိုင်တာ – What is in our hands and what is not in our hands (English + Myanmar Language) (2017-5-25)
ပျော်ရွှင်မှုဒီနေရာ ဒီအချိန်မှာ ရှိနိုင်ပါတယ် – Happiness can be here and now (English + Myanmar Language) (2017-5-27)
ဓမ္မစကြာအမေးအဖြေ ၁ -Dhammasetkyar Q&A (2017-06-24 မဟာဗောဓိ)
ဓမ္မစကြာအမေးအဖြေ ၂ -Dhammasetkyar Q&A (2017-06-24 မဟာဗောဓိ)
အနတ္တအမြင်နှင့် အကောင်းမြင်အတွေး -Anatta Attitude and Positive Thinking Q&A (2017-07-07 ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်)
ကရုဏာ-သတိအင်အားနှင့်စိတ်ခံစားမှု သမုဒ္ဒရာများ – The Power of Mindful Compassion and the Oceans of Emotion (2017-07-18 ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်)
မေတ္တာတရားမှတစ်ပါး အခြားရွေးစရာမရှိပြီ – No Choice Except Metta Loving Kindness (2017-8-6)
လောကဓံတုန်လှုပ်မှု နှင့် ကရုဏာတုန်လှုပ်မှု ကွာခြားပုံ (28-10-2017 – စင်္ကာပူ)
ဒုက္ခအသေအချာကြည့်ပြီး ဗုဒ္ဓအကောင်းမြင်ဝါဒ ရရှိလာခဲ့တယ် (2017-10-30 SG)
တို့အတင်းပြောတာ DNA က နားထောင်နေတယ် (၂.၁၁.၂၀၁၇) (မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်)
မိမိကိုယ်ကို သနားကြင်နာနိုင်ပါစေ – Be Compassionate and King to Yourself (6-11-2017)
ပိဋကတ်သုံးပုံကို ရှေးရိုးအစဉ်အလာနှင့် ခေတ်ပေါ်နည်းတို့ဖြင့်လေ့လာနည်း (2017-11-25 Hotel Max)
အလုပ်ခွင်ထဲကိုကြွတော်မူတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား – The Buddha Visited the Workplace (၃.၁၂.၂၀၁၇)
ပိဏ္ဍပါတ ပစ္စဝက္ခဏာ – ဆွမ်းတစ်လုတ် မည်သို့ဘုန်းပေးရမယ် (2017-12-01 လှည်းတန်း)
စုဆောင်းထားတဲ့ပီတိများ – Accumulated Joy (၂၂.၁၂.၂၀၁၇)
ဇာတ်လမ်းဆုံးအောင် နားထောင်ပါ (2017-12-22 တွံတေး)
ဤခရီးလျစ်လျူရှုချင်လှပါဘိ – The Journey We Wish We Could Ignore (၈.၁၂.၂၀၁၇)
ရေရှည်အကျိုးအမြတ်အတွက် ပြဿနာမက်လုံး ကရုဏာနှင့် စီးပွားရေးလက်တွဲနိုင်ပုံ ဗုဒ္ဓဒဿနတရားပွဲ သင်တန်း (ပ) (၂၁.၁၂.၂၀၁၇)
ရေရှည်အကျိုးအမြတ်အတွက် ပြဿနာမက်လုံး ကရုဏာနှင့် စီးပွားရေးလက်တွဲနိုင်ပုံ ဗုဒ္ဓဒဿနတရားပွဲ သင်တန်း (ဒု) (၂၁.၁၂.၂၀၁၇)
ရေရှည်အကျိုးအမြတ်အတွက် ပြဿနာမက်လုံး ကရုဏာနှင့် စီးပွားရေးလက်တွဲနိုင်ပုံ ဗုဒ္ဓဒဿနတရားပွဲ င်တန်း (တ) (၂၁.၁၂.၂၀၁၇)
မေတ္တာသုတ်ကသင်ပေးတဲ့ ကလျာဏမိတ္တ (2017-12-23 မြစ်သား)
စိတ်ခံစားမှု မျက်လုံးကောင်းအင်အား (2017-12-24 အုန်းချော)
သြဝါဒတရားတော် (2017-12-24 မြစကြာ)
ရောဂါလည်းရှာတတ် ဆေးလဲကုတတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓ – The Buddha Knows Both Diagnosis and Treatment (2017-12-25 Mandalay)
ပရိတ်ရွတ်တာနဲ့ ပုတီးစိပ်တာ ဘယ်လိုများ ကွားခြားပါသလဲ
ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်း (၁)
ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်း (၂)
၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များ
ဘဒ္ဒန္တသံဝရ အန္တိမဈာပန (2016-01-19)
Diagnosis & Treatment for Moody Mind (2016-02-11 IM 1)
စိတ်ချမ်းသာမှု ဘယ်မှာရှိလဲ – Where to Find Happiness (2016-02-15 ဇမ္ဗူသီရိ)
နိုင်ငံခြားသာသနာပြုဘာ့ကြောင့်လိုအပ်သလဲ – Why We Need Overseas Missionary (2016-02-16 ဇမ္ဗူသီရိ)
Emotiton Mnagement for Workplace (2016-02-17)
Emotion Management for Workplace inaCompetitive Work (2016-02-18 MRTV 4)
Spread Buddhism Into Africa Latin America Yugoslavia (2016-02-24)
စိတ်ဖြင့် စိတ်ချမ်းသာမှု ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ပါ – Let the mind produces happiness medicine (2016-06-08 ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်)
(၈)ကြိမ်မြောက် ကထိန်သင်္ကန်းအလှူ (2016-10-30 စင်္ကာပူ)
ဓမ္မစကြာ တရားတော် အကျဉ်းချုပ် Dhammasetkyar Abridged (2016-11-01 စင်္ကာပူ)
ပျော်ရွှင်မူခလုပ် ဘယ်မှာလဲ – Where is the Switch for Happiness (2016-11-01 Zabuthiri)
သြဝါဒ (2016-11-07 ရေကြည်)
ဘဝမှာအလိုမပြည့်သောအခါ (2016-11-19 စင်္ကာပူ)
မုဒိတာ ကမ္မဋ္ဌာန်း (2016-11-20 စင်္ကာပူ)
အနတ္တလက္ခဏသုတ် – Anatalatkhanasutta (2016-11-27 စင်္ကာပူ)
About IABU (2016-12-03)
အမေးအဖြေ ၂ – Children Q&A2(2016-12-03)
Inner Peace for Job Satisfication (2016-12-03 MICT 1)
Inner Peace for Job Satisfication (2016-12-03 MICT 2)
စိတ်ခံစားမှု အသိဉာဏ် လုပ်ငန်းခွင် အသုံးချ သတိပဋ္ဌာန် – Mindfulness Practice at Work (2016-12-09 မြို့တော်ဆေးရုံ)
အပမညာ (2016-12-21 Bago)
ပညာရေးဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ (2016-12-28 ဓမ္မဓရဝါဆိုကျောင်း)
ပညာရေးဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲ (2016-12-30 PhaungDawOo)
နှစ်ဟောင်းနှင့်နှစ်သစ် – Old and New Embrace the Year Mindfully and Positively (2016-12-31)
၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များ
ပျော်နိုင်ပါလျက်နဲ့ပျော်ဖို့မေ့နေသူများ (2015-06-01 ဇမ္ဗူသီရိ)
အနက်ရောင်ကို အဖြူရောင်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း (2015-06-02 ဇမ္ဗူသီရိ)
လျစ်ချူမရှု ကျောမခိုင်းသော ဥပေက္ခာ (2015-06-03 ဇမ္ဗူသီရိ)
ဗုဒ္ဓညွှန်ပြ အဆိပ်အတောက်မဖြစ်အောင် အာဟာရသုံးစွဲနည်း Buddhist Way of Eating non toxic (2015-07-25 စင်္ကာပူ)
အမေးအဖြေ (2015-07-25 စင်ကာပူ)
အလုပ်ခွင်မှာပျော်ရွှင်စေတဲ့ အလုပ်သတိပဋ္ဌာန်ဘဝနာ Simple Minfulness Practise for Job Satisfaction (2015-8-15)
ပီတိဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်း (2015-08-22 တောင်ကြီး)
စိတ်ရောကိုယ်ပါ အာဟာရဖြစ်သော (2015-08-23 မန္တလေး)
လူကြိုက်နတ်ကြိုက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် – A Business Person Who Contributes Here and Hereafter (၂၄.၈.၂၀၁၅) (မင်္ဂလာ မန္တလေး)
ကရုဏာနှင့်ပညာ – Compassion And Wisdom The Twin Pillars Of Therarada And Mahayana Buddhists (2015-08-26)
ဓမ္မစကြာတရားတော် (၁) (2015-12-24)
ဓမ္မစကြာတရားတော် (၂) (2015-12-24)
ဓမ္မစကြာတရားတော် (၃) (2015-12-24)
လူ့လောကအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ကထိန်သင်္ကန်းကပေးတဲ့စံနမူနာ (2015-12-24 MDY)
၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များ
အကောင်းဘက်တွေးခေါ်မူ – Positive Thinking (မြန်မာ + ရှမ်း) (2012-03-12)
၂၆၀၀ သစ္စာတရားခရီးစဉ် (2012-03-17 မန္တလေး)
တိုင်းပြုပြည်ပြု မင်္ဂလာ (2012-03-18 တောင်ကြီး)
Buddhist Way of Eating non toxic – English (2015-07-25 SG)
Compassion and Balance Mind – English (2015-07-26)
Message for IABU A – English (2016-11-12)
Message for IABU B – English (2016-11-12)
Children Q&A – English (2016-11-25)
Lunch Anumawdanar – English (2016-11-27)
Turning Negative Emotions into Friend Through Mindfulness Compassion(1) – English (2016-11-28)
Turning Negative Emotions into Friend Through Mindfulness Compassion(2) – English (2016-12-05)
Awakening World Translated The Pali Tip Translation in Myanmar and Beyond – English (2016-12-01)
Talking Keynote Speech – English (2016-12-01)
AwKarTha – English (2016-12-04)
Anatta 1 – English + Myanmar (2017-02-06)
Anatta2– English + Myanmar (2017-02-07)
Anatta3– English + Myanmar (2017-02-08)
Teaching of Buddhist Meditation Practice in Simple Term (MRTV) – English (2017-03-08)
The Compassion Of Mother – English + Myanmar (2017-03-19)
Happiness can be here and now – English + Myanmar (2017-05-27)
What You Let Into Your World – English (2017-10-29)
MINDFULNESS COURSE for kids – English (2017-12-18)
Buddhist Discussion on Non self – English
Positive Emotion Exercise – English
Mindfulness and Emotions Management in Dily Life
Mindfulness and Emotions Management in Daily Life day 1 – English (2016-10-28)
Mindfulness and Emotions Management in Dily Life day2Session 1 – English (2016-10-29)
Mindfulness and Emotions Management in Dily Life day2Session2– English (2016-10-29)
Mindfulness and Emotions Management in Dily Life day2Session3– English (2016-10-29)
Mindfulness and Emotions Management in Dily Life day2Session4– English (2016-10-29)
What Is in Our Hands and What is Not in Our Hands – English + Myanmar
Blessing (In English)
Mindfulness Meditation Made Easy (In English)
Chapter 1 – Introduction to Vipassana Meditation
Chapter2– The Pratice of Metta Meditation
Chapter3– How to Deal with Pain
Chapter4– Instruction on Walking Meditation
Chapter5– Meditation on the Buddha
Chapter6– Bare Attention
Chapter7– Meditation on the Impersonality of the Body
Chapter 8 – Intensive Mindfulness Pratice
Chapter9– Meditation on Death (Maranassati)
Chapter 10 – Mindfulness in Daily Life
Chapter 11 – Why Meditation Retreat